ရွာ့အရေး အဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာ့အရေး အဆက်
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on May 5, 2014 in Creative Writing, Critic | 48 comments
ရွာ့အရေးအတွက် မေးတဲ့သူတွေ မေးကြတဲ့အခါ သဘောထားတွေပါမေးတော့ ဖိုရမ်လုပ်ပြီးမေးတာမျိုး ဒါမှ မဟုတ် ပို့စ်တစ်ပုဒ်အဖြစ် ခွဲထုတ်ပြီးမေးသင့်ကြောင်း ဦးဦးပါလေရာ ရဲ့ အကြံပေးချက် ကောင်းမွန်တာမို့ မေးပြီးသားလေးကိုပဲ အစပြန်ထုတ်ပြီးရေးတင်လိုက်ပါရစေ။ ကောင်းကင်ပြာနောက်က လိုက်တာပါ။
အချစ်ရေးကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်၊ အထူးသဖြင့် ကွဲကွာရေးကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်ဆိုသော မမချွိကို မေးပါရစေ။
ဒီလိုလေ၊ ကိုယ်က မယားကြီးနေရာကဆိုပါတော့၊ ကိုယ့်မှာက သားတစ်ယောက်လည်းရှိပြီ၊ ပြည်ပကိုလည်း ခဏတဖြုတ်ရောက်နေတယ်။ အိမ်ထောင်သက်ကလည်း ဘာမှ မကြာသေးဘူး။ မြန်မာပြည်က ကိုယ့်ယောက်ျားက နောက်တစ်ယောက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ မယားကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်က ဒီလိုကြီးပေါ်တင်စော်ကားခံရပြီဆိုတော့ မကျေနပ်ဘူး။ သတင်းစာမှာ ဘာညာကွိကွ ထည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ယောက်ျားကတော့ သူ့မိဘတွေဆီက အမွေဖြတ်ဆိုတာလုပ်ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ထူဖို့ လုပ်လိုက်ပြီ။ အဲဒီမှာ ယောက်ျားက အမွေဖြတ်ဆိုတာ လုပ်လိုက်တော့ ပါရင်းပစ္စည်းဆိုတဲ့အပိုင်းက မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ လင်မယားကွဲရင် လင်ရဲ့ ပါရင်းပစ္စည်း (သူ့မိဘအမွေ) သုံးပုံတစ်ပုံ မ်ိန်းမက ရတယ်လေ။ လက်ထက်ပွားကတော့ တစ်ယောက်တစ်ဝက်ပေါ့။ လောလောဆယ်မှာ သူက အမွေဖြတ်လုပ်ချလိုက်တော့ မယားကြီးက ပါရင်းထဲက ဘာမှ မရတော့ဘူးလား။ တကယ်တော့ ဒီအမွေဖြတ်ဆိုတာချည်းကလည်း တရားမ၀င်တော့ သူ့မိဘတွေ သေပြီးရင် အမွေက သူပဲပြန်ရမှာလေ။ အဲတော့ ယောက်ျားရဲ့ ပါရင်းပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ နောက်မယားကသာ အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရှိသွားတော့မှာပေါ့။ နောက်မယားအနေနဲ့ အမွေမမက်ဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရ၊ ပစ္စည်းလည်းရ၊ အဲဒီလိုဖြစ်မကုန်ဘူးလား။ တကယ်တော့ ကိုယ်လင်တစ်ယောက်ရဖို့အတွက် သူများ အသိုက်အမြုံကို ဖြိုခွဲနိုင်တဲ့သူ၊ မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့သူ ဟာ နဂိုအခံမှာ မက်ပြီးသားပါ။ အဲတော့ မမချွိသာ မယားကြီးနေရာမှာဆိုရင် ကွာမလား။ (ဟီး … စိတ်ထဲ ကျလိကျလိ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေး မေးကြည့်တာပါ၊ မဖြေတတ်ဘူးဆိုလည်း ရပါတယ်ချင့်)
မမချွိ ဖြေပေးထားတာက =
ဝင့်။ ဒါက အချစ်ရေးဟုတ်ဘူးလေ။
ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အချိန် တို အတွင်း အောက် ဆော့တတ်တဲ့ ယောက်ကျားကို ဆက်ပေါင်းဖို့တော့ အားမပေးချင်။
သူများ အသိုက်အမြုံခွဲသူဟာ သူ့အကျိုးပေးနဲ့ သူသွားမှာမို့ မခံချင်စိတ်နဲ့ တွယ်ကတ်နေမဲ့အစား လက်လွှတ်လိုက်တာကောင်းမလားလို့ပါ။ (ကိုယ့် အရွယ်လည်းရှိတုန်းဆိုရင်ပေါ့။)
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်သိက္ခာဟာ လက်လွှတ်လိုက်မှ တက်သွားတာတာ။
ဒီ ယောင်္ကျားကို မြဲအောင် မဆွဲထားနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ။
အမှန်တော့ ရှက်တတ်ရင် အဲလို ဖောက်ပြန်တဲ့ သစ္စာဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ဖောက်ဖျက်တဲ့သူမျိုးကသာရှက်ရမှာဖြစ်ပြီး
တကယ်တော့ ကျမမေးစမ်းချင်တာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်းထက် သဘောတရားလေးထူးခြားနေလို့ မေးချင်တာပါ။ ကျမသာလျှင် တရားဝင်မယားကြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာထဲ ကြေငြာကြတာ ရိုးလို့တောင်နေပါပြီ။ အခုမှ ထူးခြားတာက နောက်ဆက်တွဲသတင်း အမွေဖြတ်ခံယူထားပြီးတဲ့အကြောင်း ။ အဲဒီအကွက်လေး တော်တော်လှနေတယ်။ ဒီလိုလုပ်နည်းအတိုင်း အများတကာ ယောက်ျားတွေ လုပ်ကြပြီဆိုရင် ဥပမာ- မိဘဆီကရမယ့်အမွေကိုရော၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုရော မိဘနဲ့ နားလည်မှုယူပြီး အမွေဖြတ်ခြင်းခံယူလိုက်မယ် ဆိုရင် ပထမ မယားကြီးခမျာ ကွာရှင်းချင်ရင်တောင် မယားစရိတ် ဘယ်ကသွားတောင်းရမလဲ။ မယားကြီးအတွက် ဘယ်လိုဥပဒေတွေက ကာကွယ်ပေးထားမလဲ။ ဒီလို ဥာဏ်ပြေးမှုအတွက် မယားကြီးကို ဘယ်လိုဥပဒေတွေက ကာကွယ်ပေးထားမလဲ။ မြန်မာတွေရဲ့ ထိမ်းမြားခြင်းဥပဒေဆိုတာ ဘာသွားလုပ်ရမလဲ။ အခုလို အမွေဖြတ်ခံယူလိုက်ပြီး သုညဘ၀က စပါတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မယားကြီးအတွက် အရိုးအရင်းတောင်မရစေရအောင် လုပ်တဲ့နည်း ဖြစ်မနေဘူးလား။
အမျိုးသမီးကို တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဥပဒေများ ရှိနေသလား။ တစ်လင်တစ်မယားထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဥပဒေများ ရှိနေတဲ့အတွက် တစ်လင်တစ်မယား ဥပဒေ မလိုအပ်တော့တာလား။
အိမ်ထောင်သည် မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ယောက်ျား အပြင်မှာ အပျော်အပါး ရှာပြီဆိုရင် မသိလိုက်ဘူးဆိုတာ ရှားပါတယ်။ မသိဘူးဆိုတာ ရှိကိုမရှိတာ။ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ယောကျာ်းကိုယ် ခွင့်လွှတ်ထားပေးပြီး မိမိအိမ်ထောင် ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကိုပဲ အာရုံရှိတာပါ။ ဘယ်မိန်းမမှ အရူးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ယောက်ျားက ကိုယ့်ကို ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ သူ့ဟာသူ အပြင်မှာ အပျော်ရှာတဲ့အဆင့်မကတော့ဘူး၊ ကိုယ့်မာနကို ရိုက်ချိုးတော့မယ်၊ ကိုယ့်အနေအထားကို မြောင်းထဲလွှင့်ပစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်မိန်းမမှ သီးခံနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မယားကြီးငုတ်တုတ်ရှိနေရက်နဲ့ သူက မင်္ဂလာဆောင်ပြတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ မြန်မာပြည်မှာသာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဒီလောက်စော်ကားခံရတဲ့အဖြစ်မျိုး ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကျေနပ်အောင် ပေးချေပြီး အရှင်းပြတ်စဲပြီးမှ သူ့ဟာသူ မင်္ဂလာဆောင်ရင် ကိုယ်လည်း အစော်ကားမခံရဘူးပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ ပြတ်စဲဖို့အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အချိန်ကြာနေတယ်ဆိုရင် ဒီကြားထဲမှာ သူ့ဟာသူ သူကြိုက်တဲ့ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းအတူနေကြပေါ့။ အခုတော့ ကိုယ့်ကို ငုတ်တုတ်ထားပြီး နောက်ထပ် တစ်အိမ်ထောင်ထူထောင်လိုက်တယ် ဆိုတာ ဘာနဲ့မှ မတူအောင် အစော်ကားခံလိုက်ရတာ။ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ အောတိုက်လို့။ ဘာဖြစ်လို့ အောတိုက်နေသလဲ ဆိုတော့ ဥပဒေကြောင့်။ ဥပဒေကိုက ယောက်ျားက မိန်းမကိုစွန့်လို့ရတယ်။ မိန်းမက ယောက်ျားကို စွန့်လွှတ်လို့မရဘူး။ ကွာချင်ရင် ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းမ လေးယောက်အထိ ယူလို့ရတယ်။ မိန်းမဘက်က ဒါကို မကျေနပ်မှ မိမိမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ခံရမှုရှိလို့ဆိုပြီး ကွာရှင်းခွင့်တောင်းရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာက မိန်းကလေးကို အပျိုစင်အဖြစ် စောင့်ထိန်းဖို့ မိဘနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုက်အ၀န်းက ဖိအားပေးထားတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ထိန်းကျောင်းထားတယ်။ စောင့်ထိန်းထားတာကို သိက္ခာတစ်ရပ်အနေနဲ့ တန်ဖိုးထားကြတယ်။ ဂုဏ်ယူစရာအဖြစ် တန်ဖိုးထားကြတယ်။
တကယ်တော့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တအသာစီးရတဲ့လူက အနိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးဘက်က အသာစီးရအောင် ဒီစောင့်ထိန်းခြင်းကို အားပေးတဲ့သဘောလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စောင့်ထိန်းထားတာကိုလည်း မှားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘောတရားတွေဟာ ဥပဒေလောက် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ လူအမျိုးမျိုး အလွှာအမျိုးမျိုး အတွက် သဘောတရားတစ်ခုနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဘက်ကို စောင့်ထိန်းစေချင်တယ်ဆိုရင် ပြီးတော့ ဒါကို ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တစံအဖြစ် တကယ်လည်း တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအစော်ကားမခံရအောင် ကာကွယ်တဲ့ တကယ့်ဥပဒေ – တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေကိုလည်း တိတိကျကျ ပြဌာန်းပေးစေလိုပါတယ်။ ဒါမှ တရားမျှတမယ်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသမီးက များလို့ဆိုပြီး တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ မပြဌာန်းတာ မဖြစ်သင့်ပါ။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျမမြင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီပို့စ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားလိုရင်း မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ အောတိုက်နေပြီးသားကိစ္စ။
တစ်ခါတုန်းက သဂျီးပြောသလိုပဲ၊ LGBT တွေတောင် ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ အမျိုးသမီးစစ်စစ်တွေက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရကောင်းမှန်း မသိသေးဘူး။ အခု အမွေဖြတ် ကိစ္စလေး တော်တော်လှနေလို့ ကျလိကျလိဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်းလေးကို လက်တန်း အလွတ်သဘောရေးတင်လိုက်တာပါ။
မမချွိ အဖြေထဲမှာပါတဲ့ သူများ အသိုက်အမြုံခွဲသူဟာ သူ့အကျိုးပေးနဲ့ သူသွားမှာမို့ ဆိုတာကိုလည်း ဘ၀င်မကျနိုင်ဘူး။ ဘ၀နေထိုင်မှုနည်းစနစ် ပြု ပြင်ရတော့မှာကို ဒီလို ဘာသာရေးဆန်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးအများစုရဲ့ အတွေး ကို အားမရနိုင်တော့ဘူး။ ဒီဥပဒေ ဒီစနစ်ထဲမှာ (မယားပြိုင် ဥပဒေ နဲ့ အပျိုစင်ဘ၀စောင့်ထိန်းခြင်းစနစ်) မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ သိပ်ပြီး အခြေအနေလှမနေကြပါဘူး။ စတေးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တန်ဖိုးတွေ မနည်းကြတော့တာလည်း အသေအချာပါ။
အမျိုးသမီးတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးမှာကို ဆက်စောင့်ဖတ်မယ်။
ပြီးရင် ယောကျာ်းတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း သေချာဖတ်ရမယ်။
ကိုယ်က ကလေးဆိုတော့ ဒါတွေကို
အလက်ဇင်း။ မှားနေပြီနော်။ ဒီကိစ္စဟာ အမျိုးသမီး – အမျိုးသား လွန်ဆွဲပွဲ မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားရေးကိစ္စ။ အခြေခံအကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ။ အမျိုးသမီးထုကို နှိပ်ကွပ်ထားနိုင်ရုံနဲ့ အမျိုးသားထုကြီး တိုးတက်မသွားဘူး။ အမျိုးသမီးထုကို ဖိနှိပ်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်ဟူသမျှ ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်မလာဘူး။ အမျိုးသမီးတွေ အဆင့်အတန်းရှိလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်မှ အမျိုးသားတွေလည်း အဆင်ပြေမယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်က ခေတ်စနစ်ရဲ့ သားကောင် မဟုတ်တာ သေချာလား။ ဒီစနစ်အောက်မှာ ဘ၀တွေ နစ်မွန်းခဲ့ရတာ များပါတယ်။ LT ကို လက်သင့်မခံနိုင်တာ၊ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် မရှိခဲ့တာ။ ဒီစနစ်တွေအောက်မှာ မြန်မာအမျိုးသမီးထု သိပ်ပျော်မနေပါဘူး။ မိန်းမတွေ ခံရတာပဲဟာ၊ ကိုယ်မပါဘူးလို့ မထင်နဲ့နော်။ ကိုယ့်အမေ၊ ကိုယ့်နှမ အားလုံးဟာ ပတ်သက်နေတယ်။ မယားကြီးတွေ မယားငယ်တွေ မယားပြိုင်တွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်မနေပါဘူး။ စနစ်ကိုက လွဲနေတယ်။ ဒါလေးကို ချပြချင်တာပါ။
အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကိုလည်း ရေးပြထားပါတယ်။ ယောက်ျားတွေအနေနဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ပြဌာန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ sex ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့် နည်းသွားမယ်လို့ ယူဆကြပြီး အကြောက်အကန်ငြင်းနိုင်တယ်။ ဒါမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပို့စ်ထဲမှာ ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခေတ်က မတူတော့ဘူး။ ဟိုအရင်က ပြည့်တန်ဆာ ရှားတယ်။ ဒီခေတ်မှာက ၀ါသနာပါလို့ကို လုပ်စားနေတဲ့လူတွေ အပြည့်။ မိန်းမတွေကလည်း ကိုယ့်ယောက်ျားမှာ ဒီကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသိရင် အိမ်ထောင်အပြိုကွဲခံပြီး မတားပါဘူး။ ကလေးဆိုးကြီးလို သဘောထားပြီး သားသမီးမျက်နှာနဲ့ အိမ်ထောင်ကိုပဲ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို ပြောင်ကျရဲတင်းစွာ စော်ကားလာတဲ့ ကိစ္စဆိုရင်တော့ ဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲ။ ဒါကြောင့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်အတွက် ယောကျာ်းတွေမှာ sex ပိုင်းဆိုင်ရာ အချုပ်ချယ်ခံရတော့မလားဆိုပြီး သိပ်ပြီးကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို တိကျပြတ်သားစွာ ပြဌာန်းပေးလိုက်ရင် အသိပညာမကြွယ်ဝသေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း မယားပြိုင်ကွ မယားပြိုင်ဆိုပြီး ဘာမဆိုလုပ်ရဲတဲ့ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးမှုကို တားမြစ်နိုင်တယ်။
အခု မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို အပျိုစင်ဘ၀စောင့်ထိန်းစေချင်တဲ့သူက ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ မပြီးသေးဘူး။ မျိုးစောင့်ဥပဒေထုတ်ပြီး ကုသလ မယူရဆိုတာ လုပ်ဦးမယ်။ ဟုတ်ပြီလေ။ အပျိုစင်ဘ၀ကို စောင့်ထိန်းမယ်။ မျိုးခြားကို မယူဘူး။ ဒါဆို ဘာပြန်ပေးမလဲ။ အပေးအယူလေးတော့ မျှဦးမှပေါ့။ ဟုတ်ပါပြီ။ ကိုယ်က ဗမာယောက်ျားတစ်ယောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ အဲဒီယောက်ျား ကိုယ့်ကို နှိပ်ကွပ်တာ မခံရဖို့ မြန်မာအမျိုးသမီးကို ကာကွယ်တာ ဘာဥပဒေရှိလဲ။
မိန်းမတွေကို စောင့်ထိန်းစေချင်ရင် တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပြဌာန်းပေးမလား။
ဒီလို ကိစ္စတွေကို နက်နက်နဲနဲ ဘာမှ မတွေးမိသေးဘူးဗျ
ကိုယ်က အချစ်တို့ ဇာတ်လမ်းတို့ထဲမှာ မျောကောင်းနေတုန်းဆိုတော့
အခုလို နက်နဲတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ နှိုင်းစာလိုက်တော့
လူကြီးပြောသမျှ ဟိုဘက်ဒီဘက် ငဲ့ကြည့်ပြီး နားထောင်နေရမလိုကို ဖြစ်နေတာ ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို နှိပ်ကွပ်ထားသလို ဖြစ်စေတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မျိုးတွေ ရှိနေတာ တွေ့ နေရပါတယ်။
မြန်မာမှာက ပိုဆိုးတဲ့ ကိစ္စလည်း ရှိတယ်
တခြားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေထက် အခွင့်အရေး ပိုရတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို နှိပ်ကွပ်သလို ဖြစ်စေတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မကြိုက်ပါဘူး။
အမျိုးသားဟာ အမျိုးသမီးထက် မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတောင် သဘောမကျပါဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လောက်တောင် အသုံးမဝင်သော ယောကျာ်းတစ်ချို့ ကို မြင်ဖူးလို့ပါ။
တစ်လင်တစ်မယားဆိုတဲ့ ထုံးစံတစ်ခုကို ဥပဒေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်နာရမယ်ဆိုရင်
အဲဒါကို ကျနော် တော့ အကြီးအကျယ်သဘောကျပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုကျိပုကျိလုပ်တဲ့ ဒဏ်တွေကို
ဆက်စ်ပန်ထွာရယ် မာဃကျော် ရယ်.. ဇနီးဟောင်း မာမီမိုးရယ် ဆိုပီး စတိုင်းယား တပုဒ်လောက် ရေးချလိုက်ရင်
မကောင်း ရှိတော့မယ်… ငိငိ…
မစ္စစ်မေရီဝိန် နဲ့ ဒေါ်ကြည်ကြည် အမှုကတော့ မြန်မာမိန်းမတွေ မယားငယ်အဖြစ် ဘာအမွေမှမရတာကို ကာကွယ်ဖို့ ပထမဆုံး စီရင်ချက်ထုတ်တဲ့ မယားပြိုင်ဥပဒေတဲ့။
တဖက်က ကြည့်ရင် မယားပြိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေတယ်။
တီဒုံ … တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေဟာ မယားကြီးကို ကာကွယ်ပြီး မယားငယ်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ဥပဒေ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေဟာ မယားကြီးကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပြီး မယားငယ်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေပါ။ မယားပြိုင်ဥပဒေကသာ မယားကြီးနဲ့သားသမီးတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ပေးပြီး မယားငယ်တွေလည်း လူတော သိပ်မတိုးစေတဲ့ ဥပဒေပါ။ သက်သက်မဲ့ မိန်းမတွေကို နှိပ်ကွပ်တဲ့ဥပဒေ ၊ မိန်းမတွေကို ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ်နိုင်အောင်ထိန်းကြလို့ မပြောရုံတမယ် ဖာသာသာဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ဥပဒေ။
တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေပြတ်သားရင် ယောက်ျားက မယားကြီးကို စိတ်ကုန်ပြီဆိုရင် ကွာရှင်းနိုင်အောင် သူလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မယားကြီးကလည်း ပြောင်ကျစော်ကားတဲ့နည်းနဲ့ ဖိအားပေးမခံရဘူးဆိုတော့ နားလည်မှုရှိပေးပါလိမ့်မယ်။ ကွာရှင်းပြီးသွားမှ နောက်တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်ရင် ဒုတိယမယားမှာလည်း သိက္ခာရှိရှိ လူတောတိုးမယ်။ နောက်ထပ်လက်ထက်ပွားတွေကိုလည်း သူလိပ်ပြာသန့်သန့် အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရှိမယ်။ ခုတော့ ဥပဒေဟာကွက်ကြီးက မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ အားပေးနေသလိုပဲ။
ကျမသာ မယားကြီးနေရာမှာ ဆိုရင် ဒီပုံမျိုးနဲ့ ဘယ်တော့မှ ကွာရှင်းမပေးဘူး။ မယားငယ်ကို အရှက်ခွဲတဲ့နည်းပဲ သုံးမယ်။
ပြုံးပြောတော့မှပဲ အကွက်လှလှ ရွှေ့တယ်ဆိုတာ သိလိုက်တာ။
အမွေဖြတ်ခိုင်းပြီးမှ လက်ထပ်ဖို့လုပ်ကြတာဆိုတော့ သာမန်လူပြိန်းတွေးနဲ့ မက်လို့ယူတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ထင်လိုက်မိတယ်။
များသောအားဖြင့်လည်း အဲလိုပဲ တွေးကြမှာပဲ။
ခိုင်ဇာပြောသလို ကိုယ့်ဖာသာစီးပွားရှာနိုင်မယ်၊ မှီခိုနေရတဲ့သူ မဟုတ်ရင် ဆွဲထားမယ့်အစား၊ လက်လွှတ်လိုက်တာ ပိုစိတ်ချမ်းသာရမယ်။
လက်ရှိမှာ မှီခိုနေရတဲ့သူဆိုလည်း အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်။
ကိုယ့်သားသမီးမို့ ကိုယ်နဲ့ပဲခေါ်ထားမလား စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်သလို….
တစ်သက်လုံးထမ်းရမယ့်ဝန်ကို ကျောင်းမှန်ကန်မှန်းသိအောင် အဖေဖြစ်သူဆီ ထည့်ပေးလိုက်။
ဒါမှ ငွေမမက်ပဲ ချစ်လို့ယူတယ်ဆိုတဲ့သူက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ရင်သွေးကို ချစ်နိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်မလားဆိုတာ။
အဟုတ်ပါ့ အန်တီမမရယ်။ ဒီအကွက်လေးခေတ်စားသွားရင် ကြော်တို့ မြန်မာမတွေ မလွယ်တော့ဘူး။ ပျက်စီးတဲ့ မိန်းကလေးက ပိုပျက်စီးမယ်။ လက်ရဲဇက်ရဲ ရှိသွားပြီလေ။ ခံရတဲ့ မယားကြီးက ပိုခံရမယ်။
အနော် ဒီနေ့ မအားလို့ ညမှ ပြန်လာမယ်နော်။
ကောင်းကင်ပြာ သေချာမသိပါဘူး…။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တယ်…။
Asian ပိုင်းတွေက မဟာအမျိုးသားတွေကို အလေးပေးကြတယ်..။ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကုလား၊ ကိုရီးယား၊ မြန်မာတွေရောပေါ့…။ သားယောကျာင်္းလေး မွေးစေတဲ့ဆေးတွေ၊ မိန်းခလေးချည်းပဲမွေးရင် ကွာလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ သူတို့တွေပဲ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ…။ ကြည့်ဖူးတဲ့ကုလားကားတစ်ခုမှာ မိန်းခလေးမွေးလို့တဲ့…နွားနို့ထဲနှစ်သတ်တယ်…။ ဒါမျိုးတွေမြင်တော့ မိန်းခလေးဖြစ်ရတာ ဘာအပြစ်များရှိလို့လဲလို့ တွေးမိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ အဲ့ဒီလောက် မဆိုးတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ…။ အဲ့ဒီလောက် မဆိုးပေမယ့်လဲ……ပေါ့လေ…
ဒီမှာလဲ ယောကျာင်္းမိန်းမ ခွဲခြားခံရတုန်းပါပဲ….။
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ယောကျာင်္းဘက်က ဖောက်ပြန်ရင် ” ယောကျာင်္းလေးပဲ၊ ပိုက်ဆံရှိတော့လဲ.” ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့အပြစ်တွေကို မှိန်ပစ်လိုက်တာပဲ…။ သိသိကြီးနဲ့ ကြိတ်ခံစားနေရတဲ့ မိန်းမကိုတောင် နင်အထိန်းအသိမ်းမတတ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့တောင် အပြစ်တင်ချင်ကြသေးတာပါ…။ ဒီတော့ ဘာဆက်လုပ်လို့ရမလဲ..အလိမ္မာနည်းနဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခု မပြိုကွဲအောင် ကြိုးစားပေါ့….။ ဒါပဲ လုပ်လို့ရတာ ရှိတော့တယ်…။
မိန်းမတွေများ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်လိုက်လို့ကတော့……
နောက်မီးလင်းတဲ့ဟာမ..လင်ငယ်နေတဲ့မိန်းမ….အိုး စုံလို့ပဲ…။ အဲ့ချိန် အဲ့မိန်းမရဲ့ ယောကျာင်္းလား အလိမ္မာနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားမှာ…။ တုတ်ဆွဲ၊ ဓားဆွဲ။
ဖောက်ပြန်တာခြင်း အတူတူ၊ အိမ်ထောင်ဘက်က စိတ်ပင်ပန်းရတာခြင်းတူတာတောင်မှ မိန်းမဖြစ်သွားတဲ့စိတ်က သူအားကိုးပြီး သူအရမ်းချစ်ပြီး သူ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပေးထားတဲ့သူက သူမဟုတ်တဲ့ တခြားသူဆိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ၀န်တိုစိတ်နဲ့၊ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ပူလောင်ရတာပါ…။
ယောကျာင်္းဘက်က ဖြစ်တာတော့ အဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေထက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရှက်ရတာ..၊ သူ့မိန်းမမှ ဒီလိုဖြစ်ရတာကြောင့် ဒေါသနဲ့ ပူလောင်ရတာပါ…။
မိန်းမတွေကတော့ ချစ်ခြင်းကြောင့်ပူလောင်ပြီး ယောကျာင်္းတွေကတော့ မာနကြောင့် ပူလောင်ကြတယ်..။
ငယ်ငယ်ကတော့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရလို့ သွားချင်တိုင်းမသွားရတာ..၊ ခရီးထွက်ချင်တောင် အများကြီးစဉ်းစားရတာ..။ အလုပ်ခွင်အခွင့်အရေးတချို့..။ ဒါတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ဖူးပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အသက်တွေရလာတော့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာထက် သာမာန်မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သိလာတယ်..။
မ၀င်းပြုံးမြင့် ပြောချင်တဲ့ သဘောကို ကောင်းကင်ပြာ နားလည်ပါတယ်…။ ဥပဒေကြောင်းအရာတွေကို သေချာမသိပါဘူး…။ အမျိုးသမီးတွေဘက်ကတွေးပေးတဲ့ ဥပဒေမျိုး ပေါ်တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်..(ထင်တာပဲ..)။ ဒါပေမယ့် လက်တလောတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်တယ်..။
ကောင်းကင်ပြာညီမလေး ငယ်ပါသေး။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာ။ အခွင့်အရေးက မိုးပေါ်က အလိုလိုကျမလာဘူး။ ဒီကိစ္စအတွက် အမြဲတက်ကြွနေသင့်ပါတယ်။ ကွန်မင့်အရှည်ကြီးအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ ညီမရေ။
ဒီမှာ သားသမီးတခုခုပြသနာလုပ်.. ငွေရေးကြေးရေး..ဖြေရှင်းဖို့လိုရင် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါ… ဟိုတချိန်… နယ်စပ်တွေဖက်တွေ..ဘာတွေထွက်သွားရင်… အိမ်က လူတွေအာပတ်လွတ်အောင်..အမွေပြတ်စွန့်လွတ်ခြင်းကြော်ငြာကြတာတွေမြင်ဖူးခဲ့တာကြာပြီ… ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်မ၀င်တော့ သိဘူး.. :))
ဥပဒေကြောင်းအရ တရားမ၀င်ပါဘူး ခွစ်ရေ။ တရားမ၀င်လို့ကို လုပ်ကြတာပါ။ တကယ်သာ တရားဝင်သွားရင် ကိုယ့်သားသမီးကိုယ် ဘယ်အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်မလဲ။
မမပြုံး ကို အဲ့ဒါ​ကြောင့်​​လေးစားတာ။ အမုန်းခံပြီး​တော့​ပြောလို့။ အဲဒီအ​မွေဖြတ်​တဲ့အကွက်​ကို အခုမှသိတာ။ ကိုယ့်​ကျင့်​သိက်​ခါကိုတလွဲ အသုံးချ​နေသူ​တွေကို ဥပ​ဒေ နဲ့ထိမ်းမှရမယ်​ထင်​တယ်​။ ကိုယ်​ချင်းစာစိတ်​။တာဝန်​ယူစိတ်​မရှိကြသူ​တွေ။ သူတစ်​ပါးကို အနိုင်​ပိုင်းလိုက်​ရမှ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ ဟုတ်​လှပြီဆိုပြီး အထင်​ကြီးသူ​တွေ ကို မုန်းတယ်​။
အဲ့ဒီအ​ကြောင်းအရာ ဖတ်​ပြီး သူငယ်​ချင်းနဲ့​ပြောဖြစ်​​သေးတယ်​။ ပိုက်​ဆံရယ်​ အာဏာ ရယ်​က ဖန်​ဆင်းရှင်​ လို့။ လုပ်​ချင်​ရာလုပ်​လို့ရတယ်​။ အပျင်း​ပြေ လူသတ်ချင်​​​​တောင်​ရတယ်​လို့။ ဥပ​ဒေ က တိကျခိုင်​မာစွာနဲ့ အများပြည်​သူအတွက်​အကျုံးမ၀င်​ရင်​။
ပြီး​တော့ ကျမ ​တွေမိတာ​လေးတစ်​ခု​ပြောပြရရင်​ နိုင်​ငံရပ်​ခြား​ရောက်​ပြီး ပိုအမြင်​ကျယ်​လာပါတယ်​ဆိုတဲ့ သူတစ်​ချို့ က ပြည်​တွင်းကမသိနားမလည်​သူ​တွေကို အနိုင်​ကျင့်​ကြတယ်​။​ခေါင်းပုံဖြတ်​ကြတယ်​။
ဦး​ဖော နဲ့ သူကြီး ကို​လေးစားတာ က ပြည်​တွင်း​နေသူ​တွေရဲ့ စိတ်​တံခါး​ပေါက်​ကိုဖွင့်​​ပေးတယ်​။ များများ​တွေးခိုင်းတယ်​။ ပို့စ်​နဲ့လွဲသွားရင်​ခွင့်​လွတ်​ပါ။ကြုံလို့တစ်​ခါတည်းမန့်​ခဲ့တာ။
အိုင်းရစ္စရယ် … မတို့က အိမ်ထောင်ပြိုကွဲတာ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းသလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ ခံစားခဲ့ရတဲ့လူတွေပါ။ ဒါကြောင့် မပြိုကွဲသင့်ဘူးလို့ ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြိုကွဲချင်လည်း ပြိုကွဲမယ်၊ မကွဲချင်လည်း မကွဲဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ ဥပဒေကြီးက ဘာမှကို သုံးစားလို့ မရဖြစ်နေတာ။ ထိမ်းမြားခြင်းဥပဒေတွေ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ရှေ့ခုနစ်အိမ်၊ နောက်ခုနစ်အိမ်သိရင် လင်မယားအရာမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်မရှိတော့တဲ့ ဥပဒေတွေ၊ နောက်တိုးပေါ်ပင်ဖြစ်လာဖို့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေ အဲဒါတွေအားလုံးထက် တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေကသာလျှင် အမျိုးသမီးထုကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်မယ်လို့ ယုံပါတယ်။
အဲဒီ အမွေကိစ္စတို့ ခွဲဝေခန်းတို့ကို နားလည်ဘူးးဗျ။
ဒီမှာတော့ စုငွေ ထားရတာ ဆိုတော့ ကိုယ်သေရင် ဘယ်သူ့ပေးခဲ့ရမယ်၊ ကိုယ့်ငွေစာရင်းဟာ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဘယ်သူ့ဆီရောက်မယ်ဆိုတာ နာမည်ပေးရတယ်ရယ်။
လက်ထပ်ဥပဒေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှ နောက်တစ်ယောက်ယူလို့ရတယ် ထင်တယ်။
အာ့ကြောင့် ဒီမှာလည်း LT တွေ များတယ်။
အိမ်ဝယ်မယ် ဆိုမှ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးကြတာ။
နောက်ပြီး တိုင်ရင် အမျိုးသမီးကို ညှာတာတဲ့ ဥပဒေမျိုးပဲ။
အာ့ကြောင့် လမ်းမှာ မိန်းမ တစ်ယောက်တည်းဆိုပြီး မထီမဲ့မြင် စတာမျိုး ခေါ်တာမျိုး ထုံးစံကို မရှိတာ။
ကြပ်မတ်တဲ့ ဥပဒေ ထုတ်ဖို့က ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းရှိတဲ့ အစိုးရနဲ့မှဖြစ်မှာ။
ကေ၊ LT ရယ်၊ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေရယ်က တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်။ မြန်မာပြည်မှာပဲ ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ကြရတာတုန်း။
လက်ရှောင်မလို့ တွေးထားမိတဲ့ ပိုစ့်ထဲက တခုပါပဲ ….
ဒါပေသိဗျာ … တခုပဲ … မိန်းမတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေ တို့ ..
ယောက်ျားတွေ ကို ကာဗာလုပ်ထားသလို (သောင်းကျန်းခွင့် ပြုထားတဲ့ ဂွင်တို့)
အဲ့လာတွေ အားလုံးကို perfect ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် ဥပဒေ မပေါ်သေးဘူးမှတ်တယ်…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ ..ဘောင်နဲ့ ..ကမျင်းချင် ကမျင်းဟေ့ ..သည် ဘောင်တော့ မကျော်နဲ့ …
ကျော်ရင် … တဖက်က ဘယ်လို စွဲရင် ဘယ်လို လျော်ရမယ်.. ဘယ်လို ကန့်သတ်ရင်.. ဘယ်လိုခံရမယ်..
ဆိုတဲ့ စည်းနဲ့ ဘောင်နဲ့ ကလနား နဲ့ ချုပ်ခဲ့ ကန့်ခဲ့… တာတွေက လက်တလော ကမ္ဘာတန်း လက်ခံထားတဲ့ စံတခု..။
တလင်တမယားစနစ် ကို မျက်စိမှိတ် မထောက်ခံချင်ပါဘူး … (Side Effect အနေနဲ့ LT တွေ ခေါင်းထောင်လာမယ်)
သည်နေရာမှာ စကားစပ်လို့ ပြောရရင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်တချို့မှာ Sponsor ကြောင့်ထက် LT ကြောင့်
ဘ၀ပျက်ရတဲ့ Case တွေ ဒုနဲ့ဒေး … (မရေးပါဘူး .. ဆြာ့ဆြာတွေ ၀င်ရေးကြလိမ့်မယ်..)
မျိုးဆောင့်ဥပဒေ ကအစ … လူ့အခွင့်အရေးကို ထိပါးမယ့် ဘယ်ဥပဒေကို မဆိုလည်း မထောက်ခံပါဘူး ..။
မဟာ အိပ်ထိယ ၀ါဒီဖြစ်စေ မဟာ ပုဒိသ ၀ါဒီဖြစ်စေ .. တခုခုကို ဇောင်းပေးမယ့် ဥပဒေ ဓမ္မသတ် တခုခု အသစ်ပြဌာန်းမှာလည်း
လက်မခံပါဘူး … ဒါဖြင့် .. ဟဲ့မိဂီ … ညည်း ဘာကို လက်ခံသလဲ မေးရင်တော့ .. Stakeholder Analysis ကိုပဲ လက်ခံတယ် ပြောပါရစေ
Stakeholder (ဖြစ်စဉ် အတခုအတွက် အဆိုးသော်လည်းကောင်း အကောင်းသောလည်းကောင်း တစုံတရာ effect ခံစားရမယ့် ဆက်စပ်ပါတ်သတ်တဲ့
ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် လင်ငယ်ထားထား မယားငယ်ထားထား. (အထီးဦးစားပေး ဥပဒေ အမ ဦးစားပေးဥပဒေ ပြဌာန်းတာမျိုးထက်)
သည်လို တယောက်ယောက်ဘက်က ဖောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ … နစ်နာတဲ့ဘက် ..ခံရတဲ့ဘက်ကို ထိုက်သင့်တဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ .. အသာပေးမှုတွေ
လူမှုရေးအရ အားပေးမှုတွေ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအရ …(ကောင်ထီး – ကောင်မ ညည်း ညံ့လို့အေ) ဆိုတာမျိုး မခံစားရစေဘဲ ..အတိုင်းတာတခုထိ
ပြည့်ဝတဲ့ right တခု ဖြစ်အောင် ပြဌာန်းဖို့ပဲ လိုမယ်ထင်ပါတယ်…။
သည်နေရာမှာ သိပ္ပံ ပညာ ဆေးပညာနဲ့ ဥပဒေရေးရာ ပညာရပ်တွေ ပေါင်းစည်းအားဖြည့်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ..
(သုတ္တန် တွေကို မရေးချင်မိတာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျ…)
တန်တော့ …သည်လိုပြောရင် တစ်တစ်ရော လစ်လစ် ပါ ဆဲမယ် ဆိုတာ သိပါတယ်…။
ပြန်ကောက်ရရင် Stakeholder Analysis ပဲ အရေးကြီးတာပါ.. မယားကြီး-မယားငယ်။ လင်ကြီး- လင်ငယ် ..ဆိုတာထက် ..အဲ့သလို ကညော့်တဲ့
တစုံတယောက်ကြောင့်ထိခိုက်ရမယ့် Stakeholder (သားသမီး ဆွေမျိုး မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ ဘော်ဒါအပေါင်းအသင်းကဏ္ဍ )
အတွက် .. အသင့်တော်ဆုံး အဖြေကို ညှိနှိုင်း ဖော်ဆောင် ရဖို့ကပဲ ..အဓိက ကျမယ်ထင်ပါတယ်..
သည်အကြောင်းပြောရရင် နောက်ထပ် side effect ဖြစ်မယ့် ကိစ္စတခု ရှိသေးရဲ့ဗျာ..။ ဆိုပါစို့ ..မိန်းမသားတွေကို ပိုမို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေ
ပြဌာန်းမယ် ဆိုပါစို့… ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြဿနာ မရှိဘူးဗျ။ မပြောကောင်း မဆိုကောင်းပေါ့လေ…။ ဘိရုမာ ပြည်ကြီးသာ တိုးတက်ချမ်းသာ
ကြီးပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်…ဒါက တချို့ နိုင်ငံကြီးတွေ လက်တလော ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံသားပြဿနာ (အွန်ပေပါ ဘောင်ဝင်ခြင်း ကိစ္စရပ်) ဖြစ်လာဖို့ မလွဲဘူးပေါ့..
ဆိုတော့ မှားတဲ့လူ မှန်တဲ့လူ အပြစ်ရှိသူ အပြစ်ကင်းသူ ခနထား ..သည်ပြဿနာ အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာတော့ ..သက်ဆိုင်သူအားလုံး (နီးပါး) ကျေနပ်နိုင်မယ့်
အဖြေကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တော့ ကျနော်တို့တွေ ပိုယဉ်ကျေးဖို့တော့ ..လိုအပ်တယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျို့ …။
ဘာဥပဒေ ညာဥပဒေ ခနထားလို့ …လူတယောက် ကို ကားတစီးက ၀င်တိုက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုပဲ assume လုပ်ကြည့် …
အများစု ကားသမား ထွက်ပြေးပါတယ် .. မပြေးနိုင်လို့ ..ရပ်ကွက်က ၀ိုင်းချုပ်ခံထိရင် ကောင်းသူထိပ် မကောင်းသူထိပ် ဆွမ်းကြီးလောင်းခံရပါတယ်..
အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာတွေလည်း သည်လိုပါပဲ … ဘယ်သူကောင်းတယ်/မကောင်းဘူး ဘယ်သူမှန်တယ်/မမှန်ဘူး ဆိုတာဘေးချိတ်..
၂ဖက်လုံး ခွတီးပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းချင်တဲ့ကျေးဇူးရှင်များက ပိုများနေပါတယ်…။်
ဆိုတော့ ..တိုက်မိပဟေ့ ဆိုရင် ..ကားဆြာ ပြေးတယ်..။ မပြေးရင်သူ သေမှာကိုး ..အဲ့သည့်မှာ အတိုက်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မသေသင့်ဘဲ ..
ဆေးရုံအမီမရောက်လို့ သေရတဲ့ ကေစ့်တွေ ဒုနဲ့ ဒေး..။
အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စရပ်မှာလည်း အလားတူစွာ…။ ပတ်ဝန်းကျင်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတို့ ဆွေမျိုးတို့ ဆိုတာတွေရဲ့ ဖိအားကြောင့်…
မြုံနေတာ.. အသံမထွက်တာ… လူမသိစေတာ ကြိတ်ဖြေရှင်းတာ တွေကြောင့်… နစ်နာခဲ့ရတာတွေတပုံကြီးရယ်ပါ…။
လူတိုက်တဲ့ ကားသမားကို အရပ်က ၀ိုင်းမရိုက်လည်း သူ့ လုပ်ရပ်သူတာဝန်ယူရမှာ ထုံးစံ။
အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ ပြသနာတွေကိုလည်း အရပ်က ကြီးတော်နွားမကျောင်းဘဲ နေပေးသင့်တာက လည်း ဖြစ်သင့်တဲ့ အရာပါ။
ဆိုတော့ ..ကာယကံရှင်တွေမှာ… ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ပြရုပ်လှဖို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုက အော်တို စွဲနေပါပြီ.။..
(ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ သားသမီး အမွေတို့ က နောက်မှ)
အရပ်ထဲ ..၆၃မကျဘူး အပြောမခံထိဖို့ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ကအရင်.. တခါတခါမှာ အဲ့ဒါက ဆေးမြီးတို ဖြစ်သွားတတ်ငဲ့ ….
အဲ့သည့် မြန်မာစကား ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ဆိုတာဂျီးကပဲ… လူတွေရဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်ပုံကို အတော် ဆွဲချသွားတယ် မြင်ပါတယ်..
အချုပ်ပြောရရင် … အပြင်ကိစ္စတွေ ခနထား …Stakeholder အပြေလည်ဆုံးဟာကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းယူကြ
ပတ်ဝန်းကျင်က အတင်းအဖျင်းသော်လည်းကောင်း ..အဟွာ ပလပ်စ် အဟွာ ၇ရက် ဖြစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သော်လည်းကောင်း..
၆၃မကျတဲ့ အန်းတိတ် အုပဒေ ကိုသော်လည်းကောင်း ခနလေးမေ့ပစ်လိုက်ပါ။ ကျင့်ဝတ်တို့ နီတိ တို့ နဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ သော်လည်းကောင်း
ဂျန်နရေးရှင်းအလိုက်သော်လည်းကောင်း ပြင်ရမယ့် သင်ရမယ့် ကိစ္စ လို့ ထင်ပါတယ်..
(တစုံတရာ ဥပဒေပြုမယ်ဆိုရင်တော့ …ရေရှည်မှာ လည်းဆေးမြီးတို ဖြစ်မှာ မလွဲသလို ..တဖက်ကလည်း …ယိုပေါက်တွေကနေ…
အော်ဖစ်ရှယ် မဟုတ်တာလုပ်ခွင့် ပြဌာန်းပေးသလိုဖြစ်မှာ ပါပဲ..)
ဘာကြောင့်သည်လိုတွေးမိသလဲဆိုတော့ ..ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးသလို တချို့ exceptional case တွေလည်း တပုံတခေါင်းမြင်မိတာမို့ပါ…
အဘိုးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ကာတွန်းဆြာ တယောက် ရေးဖူးတာ ငယ်ဘ၀ကဖတ်ဖူးပါတယ်…
ဘာတဲ့ တရားဥပဒေဆိုတာ ခိုင်ကြည်တဲ့ သံကြိုးချိန်း ကြီး တခုပါတဲ့ …သို့သော် exceptional case တွေ သိပ်သပ်များလွန်းနေတော့
ချိန်းကြိုးကို အထက်က ကျော်သူ နဲ့ အောက်ကကျော်သူနဲ့ ..နောက်ဆုံး အလယ်က ဂလိုင်ပေါက်ကပါ ကျော်တဲ့လူတွေ ပုံ
တနေ့သေကြရမည်… မသေခင် .. လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြပေါ့ဗျာ…။
ယိုစီမနော်…. ညည်း ယီးတီးယားတား လုပ်ပြန်ပြီ။ ယိုစီမပြောတဲ့ သဘောတရားတွေဟာ လက်တွေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးအေ့။ ဒီမယ် ပြောပြပါရစေ။ မျှစ်မမတို့က ဒေါင်ဒေါင်မြည်မိန်းမစစ်စစ်တွေ၊ ဒီတော့ကာ မိန်းမချင်းချင်း မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်တယ်။ ဂျော်လကီဆက်ဆက် တစ်ခွန်းဟတာနဲ့ အူဘယ်နှခွေရှိမှန်း သိပြီးသား။ အငယ်မဆိုတာ အမြဲလူပါးဝတယ်အေ့။ အဲလို လူပါးဝလို့ရအောင် ဥပဒေက ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ မဟုတ်တာကို လက်ရဲဇက်ရဲလုပ်ရဲစေတယ်။ မျှစ်မတို့အတွက် သိပ်ပြီး သေချာတိကျလွန်းတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ယောက်ျားတွေအတွက်တော့ ဇဝေဇ၀ါလေးတွေ ဖြစ်နေကြရတယ်။
ယိုစီမကို ရှီးနဲ့ တိုင်ပြောရမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးအရ မယားပြိုင်ဥပဒေကို ပြဌာန်းပေးထားရင် လင်ပြိုင်ဥပဒေကိုလည်း ပြဌာန်းပေးရမယ်။ မျှစ်မတို့ အိမ်တံခါးပုတ်ပြီး ဒစ္စကောင့် ဒစ္စကောင့် အော်ထည့်လိုက်ရင် တစ်ခါတည်း ၀ုန်းဆို အိမ်ပြိုသွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်မတို့မှာ ဒါမျိုး မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို လင်ပြိုင်ဥပဒေ မရှိဘူး။ အငယ်လေးကို လင်ခိုးမှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရတယ်။ ခုဆို မျှစ်မတို့နိုင်ငံကြီးဟာ ဒီမိုခွေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်နေပြီဆိုတော့ မယားပြိုင်ဥပဒေရှိရင် လင်ပြိုင်ဥပဒေပါ ချပေးရမယ်။ ဒါမှ တရားမျှတမှာပေါ့။
ပြီးတော့ ရှီးကလေးဟာလေ သိပ်ကိုချောမောတဲ့ ကလေးမပါ။ သိတဲ့အတိုင်း ရုပ်ရည်ရူပကာချောမောလှပမှုဆိုတာ အသံအရည်အသွေးလိုပဲ မွေးရာပါ ပါရမီတစ်ခု။ အားကစားအရည်အသွေးလိုပဲ မွေးရာပါ ပါရမီတစ်ခု။ ဒါကို ယိုစီမတစ်ဦးတည်း မောင်ပိုင်စီးမယ်ဆိုရင် ဘယ်တရားမလဲ။ ပါရမီရှင်အနေနဲ့ သူ့ပါရမီအပေါ် ခံစားစံစားခွင့်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ရှီးကလေးသာ နောက်ထပ် သုံးလေးဦးအပြိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ယိုစီမအနေနဲ့ နားလည်မှုပေးသင့်တယ်။ ဆေးပညာတွေလည်း ထွန်းကားပြီဆိုတော့ ယိုစီမအနေနဲ့ လှည်းကျိုးထမ်းစရာလည်း မလိုပါဘူးကွယ်။ ယိုစီမမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဂဇက်တစ်ရွာလုံးက ၀ိုင်းပြီးဖြေသိမ့်ပေးမှာပါ။ Stakeholder ဆိုတာပေါ့ကွယ်။ ။
LT တပ်ချုပ်
ဘောက်မဲ့ကြောင့် ကျုပ်ပြောတာတွေက လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်ရမှာတုံး …။
တကယ်ဖြစ်နေ တဲ့ တချို့.. အဖြစ်အပျက်တွေကို အောင့်သက်သက်နဲ့ လက်ခံပေးနေရတဲ့ …
အနေအထားတွေပါ ဦးပါ ပြောသလိုပဲ ..ဥပဒေတွေ အချက်အလက်နဲ့ အနေအထားတွေ ရှိနေပြီးသားပါ..
နောက်တခု သဂျီးပြောသလိုပဲ … လူကိုလူလိုမှတ်ဖို့ လိုတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ ရှိနေပြီးသားပါ…။
စကားမစပ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်အတော်များများမယ်… မယားခိုးမှု မရှိဘူးဗျ…။
သည်လို မရှိခြင်းအားဖြင့် …အားနေ ကြုံရာလူချင်း .. ဒချိ ..ဒချိနေတယ် မထင်စေချင်ဘူး..။
အခွင့်အလမ်းရလို့ မဒချိ တဲ့အပြင်..ပိုတောင် စောင့်ထိန်းတတ်သေး…ပိုတောင်အကန့်ပြည့်တတ်ကြသေးတယ်..
သည်နေရာမှာ ဂဏန်းကြီးပြောဖူးတဲ့ စကားလေး သွားသတိရတယ်… ဘာသာတရားတို့
မိရိုးဖလာတို့ ယဉ်ကျေးမှုတို့ ပြောပြောနေပြီး အားနေ ပေါင်ဂျားထဲကဟာကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးနေကြတာပဲ ဆိုတာ ..
ထားပါတော့… အဲ့သည့်အချိန်မှာ ဘာကို သွားသတိရလဲ ဆိုတော့ အမှိုက်မပြစ်ရ ဆိုင်းဘုတ်လိုပဲ ..။ အဲ့သည့်ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တာကိုဠ် ကိုက
သည်အရပ်ကို လာသူတွေဟာ သောက်စည်းကမ်းမရှိကြပါဘူး .. ၀န်ခံထားသလို ဖြစ်နေတော့သကိုး..။
မယားပြိုင်ဥပဒေနဲ့ လင်ပြိုင်ဥပဒေ ကို တန်းတူပြု ပြောကြားဖို့ မလိုဘူးမှတ်တယ်…။
ကျနော် ပြောဖူးပါတယ် … ကျောင်းမှာ ဆြာ ပေါက်စ အထီးနဲ့ အစ်မလေးတွေ ..။
သင်တန်းပါတော့ ဆြာထီး ကံကောင်းစွာနဲ့ မဲမကျ ..ဆြာမလေးက မဲကျတော့ …
ကျမဗိုက်ထဲမယ် ..ကျမချစ်ချစ်နဲ့ရတဲ့ သာမီးလေး ၂လသားရှိတယ်တဲ့ ..။
(ဇာတ်ပေါင်းတော့ ..ဗိုက်ထဲ သားအိမ်မရှိတဲ့ ဟိုကျောင်းဆြာလေးသာ ဖောင်ဂျီး ဂိုးတော့ ဖြစ်ရသကိုး..)
ပြောချင်တာက ..အဲ့သည့်မှာ ပါပါတယ်… ယောက်ျားမိန်းမ ..တန်းတူဆိုတဲ့ အယူအဆ..မယားငယ် ထားတာခွင့်ပြုတဲ့
ဥပဒေ နဲ့ လင်ငယ်ထားတာ ခွင့်ပြုတဲ့ ဥပဒေ.. ဘယ်တော့မှ တန်းတူရယ်လို့ ပေါ်လာမယ် မထင်ပါဘူး…
(ယောက်ျားသားတွေဗိုက်ထဲကို သားအိမ် မထည့်ပေးနိုင်ခင်အချိန်ထိ)
ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း မရှိဘူး လို့ သိထားပါတယ်…
ဘာကြောင့်တုန်းဆိုတော့ …LT လောက်တော့ သနားသေးတယ်… ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးထင်းခွေမယ့် ဥပဒေဖြစ်ဖို့များနေတာ ကြောင့်ပါ…
ဖစ်လစ်ပီနိုတွေ… စပန်းနယာဒ်တွေ နဲ့ စိနတွေ …အော်ဇီ ဂျပန် နဲ့ ယူအက်စ်ကို ဘယ်လို ကျားချောင်းချောင်းလဲဆိုတာပါ..
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ကမ္ဘာတန်းအဆင့်မဖြစ်သေးသမျှ တော့ သည်လို ဥပဒေ ပြဌာန်းတာ ပြသနာမရှိဘူး မှတ်ချင်မှတ်ပါလိမ့်မယ်..
သို့သော်… မြေကြီးကုန်းကိုက်ရမယ့် ကောင်တွေအတွက် .. တံခါးလေး စေ့ရုံပဲလား ဖြစ်သွားရင် .. ဘယ်သူ့မှ မကောင်းပါဘူး..။
ပုခက်လွှဲသောလက်ဖြင့် ဘလားဘလား ဘလား ကိုခနထား ..။ အနည်းဆုံးတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအပိုင်းမယ်..
ပုခက်လွှဲသော လက်က အတော် အရေးပါတယ် ခည ..။
အစ်မမျှစ်ကြော် ပြောထားတဲ့ စကားမှာကိုပါပါတယ်… ဆေးပညာ ထွန်းကားနေပြီ ဆိုတဲ့စကား…။
တကယ်က မဟုတ်ဘူးဗျ…အစောကြီးကတည်းကကို လွဲနေတာ ….ယောက်ျားသားတွေဗိုက်ထဲမယ် သားအိမ်မရှိနေခြင်း ဆိုတဲ့…
ထိပ်ဆုံး လူဖြစ်မှု ကိစ္စရပ် မှာကိုက သည်လိုဥပဒေမျိုး မဖြစ်လာဖို့ အကြောင်းဖန်တာပါ.။
တခါတခါ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်ဖူးတဲ့ စကားတခွန်းလိုပေါ့….
ဘယ့်နှယ့် ထွက်ကျလာတဲ့ ကော်ဖီဗူး ..သူ့အကြွေစိကြောင့်မှန်းမသိ ..ကိုယ့်အကြွေစိကြောင့်မှန်းမသိ ဆိုတာမျိုး…။
ဆိုတော့ဗျာ ..တလင်တမယားဥပဒေတဲ့ ..(ဖောက်ပြန်တာကို ကျနော်လည်း အားမပေးလက်မခံပါဘူး)
အနှီဥပဒေ တည်ခဲ့ရင် …ဟုတ်ပါပြီ..တည်ခဲ့ရင် ဘယ်လို penalty ပေးမှာတုန်း..။
ထောင်ထဲ ထည့်မှာလား ..။ (၂မိသားစုလုံးအတွက် ထိခိုက်ရမှုဖြစ်သွားမယ်..အနည်းလေး တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂျီဒီဘီ ကျမယ်ရော်)
မထည့်ပါဘူး အခွန်ကောက်မှာလား ..ရှင်းခိုင်းမှာလား…။ တကယ်က ဗျာ..
ဦးပါပြောပြသွားတဲ့ ဥပဒေတွေ အချက်အလက်တွေမှာကို ပါပြီးသားပါ…။
ဟေ့ ..သည်လိုဖြစ်လာရင် သည်လိုရှင်း ဟေ့ ဆိုပြီး..
လုပ်သင့်တာက ..အဲ့သည့် ဥပဒေတွေ ခိုင်မာဖို့ တိကျမြန်ဆန်ဖို့ … နစ်နာသူဘက်ကို အားပေးကူညီနိုင်ဖို့
(လက်တလောကတော့ သိရှိတော်မူသည့်အတိုင်း တရားမမှုဟေ့ဆိုတာနဲ့ .. ခွေးမသမီးသားတွေက ၀ါးဖို့ ကျစ်ဖို့ ရစ်ဖို့
အဲ့ဒါကိုပဲ ထိန်းဖို့လိုအပ်တာ … မတရားခံရသူကလည်း ရုံးပြင်ကနား မကြောက်အောင်…
မဟုတ်တာလုပ်သူကိုလည်း ဘာဘာဗာမှ မရှိစေရဘဲ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ စီရင်နိုင်အောင်…ပေါ့…။
ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ သဘာဝအရကို မတူညီတဲ့ကိစ္စ ကို …ဥပဒေအရ …လင်ပြိုင် မယားပြိုင်ဆိုတာမျိုး
(နထီးတကျပ် နမ တကျပ် ဆန်ဆန် ..ကွန်မြူနစ်အရောင်ဆိုးမှုမျိုးနဲ့) ပြဌာန်းမယ် ဆိုရင်တော့…
အဆင့်မြင့်မြင့် ပြောရရင် ..သိမ်မွေ့သော လူကုန်ကူးမှုတွေ
အဆင့်နိမ့်နိမ့်ပြောရရင်… ပြည့်တန်ဆာ ကုန်သွယ်မှုတွေ ဖြစ်ကို ဖြစ်လာအုံးမှာပါ…။
မိန်းမဆိုတာ နှိမ်စရာ ချိုးဖဲ့စရာ အောက်တန်းနောက်တန်းမှာ ထားစရာ ခိုင်းစရာ ..လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်
မိန်းမဆိုတာ ချစ်စရာ မြတ်နိုးစရာ.. တနေ့သေရမယ့် ကိုယ့်ဘ၀ကြီးကို သူ့လက်ထဲအပ်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့
ကိုယ့်အုပ်ထိန်းသူအဖြစ် ကိုယ့်အထက်အရာရှိ အနေနဲ့ ပြုံးပြုံးကြီး ဘ၀ကိုရင်းလို့ ထိုးအပ်စရာ လူတန်းစားတရပ်ပါ…။
သို့သော်.. သဘာဝတရား အရ မတူညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရှိနေလို့ … လူကိုလူချင်း ထိန်း ချုပ်ကွပ်ညက်ရမယ့် ဥပဒေဆိုတဲ့
အရာတခုအရတော့ ဘယ်တော့မှ တူညီသော ပုဒ်မပုဒ်ထီး မျိုးပေါ်လာအံ့ မထင်ပါ..။
P.S .. ကျနော် နော်ရှီးနဲ့ ပြတ်သွားပြီဗျ။။။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းတွေကြောင့်ပါ.။ သူ ဒါတွေ ဖတ်ရရင် စိတ်ချမ်းသာအံ့မထင်။
တခုတော့ ဖြေသာပါတယ်… သူ စိတ်မချမ်းသာရမယ့် အရေးအသားမျိုးက ယောက်ျား တယောက် ရေးခဲ့တာမဟုတ်လို့ပါပဲ…။
ပထမအချက်ပြောချင်တာက ရှီးကို ထိပါးလိုရင်း မဟုတ်ရပါ ဂီရေ။
ဒုတိယအချက်ကတော့ လင်ပြိုင်ဥပဒေ တောင်းဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ဖက်လူကို အနိုင်ရအောင် ပြောရင်း ချော်တောငေါ့သွားတာပါ။ ခုနေသာ လင်ပြိုင်ဥပဒေကို ပြဌာန်းရင် အဲဒါကို ကန့်ကွက်မှာ ကျမထိပ်ဆုံးပဲ။
ဒီကွန်မင့်ကို ရှင်းရမှာ သိပ်မွေ့တယ်။ ပြတ်သားဖို့လိုတယ်။ မှန်ကန်ဖို့လည်း လိုတယ်။ ဒါကြောင့် အာရုံစူးစိုက် ၊ကီသွင်းပြီး ဖတ်ပါ ဂီရေ။
(စကားမစပ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်အတော်များများမယ်… မယားခိုးမှု မရှိဘူးဗျ…။
သည်လို မရှိခြင်းအားဖြင့် …အားနေ ကြုံရာလူချင်း .. ဒချိ ..ဒချိနေတယ် မထင်စေချင်ဘူး..။)
ဒါက ဂီရေးတဲ့စာပုဒ် ။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒါမျိုး မရှိတာ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေရှိနေလို့။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ယဉ်ကျေးတယ်။ ဘာလို့ဆို မကောင်းမှုကို အားပေးတဲ့ ဥပဒေ မရှိဘူး။ မြန်မာမှာက မိန်းမကနောက်တစ်ယောက်ယူရင် ဒါအိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် လင်မယားကွာရှင်းရင် ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတယ်။ ယောက်ျားကဖောက်ပြန်ရင်တော့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုမဖြစ်ဘူး။ ဒုတိယအိမ်ထောင်အဖြစ် စာရင်းဝင်တယ်။ ပစ္စည်းလက်မဲ့ မဖြစ်ဘူး။ ဖောက်ပြန်မှုတွေကို တရားစွဲပြီး ထောင်ထဲထည့်စရာမလိုပါဘူး။ ကွာရှင်းတဲ့အခါမှာ ဒီလို မတရားလို့တော့ ဘယ်ရမလဲ။
ယောက်ျားမိန်းမ တန်းတူအခွင့်အရေးတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာ အစောထဲက ကျမပြောတဲ့ကိစ္စဟာ sex ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး။ သားအိမ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ သားအိမ်ကြောင့် တန်းတူ မရနိုင်ဘူးလို့ လူတိုင်းတွေးကြတယ်။ တကယ်မှာ သားအိမ် သည် လက်သည်တရားခံမဟုတ်ဘူး။
ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်မိန်းမ မြုံနေတယ်ဆိုပါတော့။ ကိုယ့်မိန်းမက မြုံနေတာပဲကွာ။ သူ့လည်း နောက်တစ်ယောက်ယူချင်ယူပစေဆိုပြီး လက်သင့်ခံနိုင်သလား။ ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။ diginity ပိုင်း ရှိနေပြီ။ လူတိုင်းမှာ မာနနဲ့ချည်းပါပဲ။ မိန်းမကတော့ ကိုယ့်ယောက်ျား နောက်မယားယူရင် လက်သင့်ခံပေးရတယ်။ မခံနိုင်ရင် ကွာရှင်းဖို့တောင်းဆိုရတယ်။ ဒါဟာ မိန်းမကို diginity ပိုင်းမှာ နှိမ့်ချစော်ကားထားတာ။
ကျမထပ်ပြောမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်လင်တစ်မယား မပြဌာန်းနိုင်ဘူးဆိုတာ တကယ်တော့ မိန်းမကို နှိမ့်ချလိုရင်းပဲ။ သားအိမ်နဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ဆန္ဒချင်းမတူဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ မိန်းမတွေနားလည်ထားပြီးသား။ ဒါကြောင့် အပြင်မှာ ပျော်ချင်ရင်ပျော်၊ တရားဝင်ကတော့ ကိုယ်ဖြစ်နေရင် ဒါစော်ကားမှုမဟုတ်ဘူး။ သင်္ဘောသားမယားတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
(ဆိုတော့ဗျာ ..တလင်တမယားဥပဒေတဲ့ ..(ဖောက်ပြန်တာကို ကျနော်လည်း အားမပေးလက်မခံပါဘူး)
ထောင်ထဲ ထည့်မှာလား ..။)
ထောင်ထဲထည့်စရာ မလိုပါ။ အဲဒီအခါ အူတီးအူတပုံနဲ့ သူများယောက်ျား အမိဖမ်းချင်တဲ့ မိန်းမတွေ အဖေမပေါ်ဘဲ ခလေးမမွေးရဲစေရဘူး။
အခု မြန်မာပြည်မှာ မိန်းခလေးတွေ ဘယ်လောက်ပျက်စီးနေတယ်မှတ်သလဲ။ မယားရှိပြီးသား ယောက်ျားကိုမှ ချိုင်ချင်ကြတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာကို မမှားဘူးလို့ ထင်ရစေအောင် ဥပဒေက ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တစံကို ရိုက်ချိုးထားတယ်။ မျှစ်မရဲ့ ယောက်ျား မုန့်ဆိုင်သွားရင်တောင် အရောင်းစာရေးမလေးက ခါးကြားထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဆတ်ခနဲနှိုက်ပြီး မျှစ်မ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်တယ်။ အန်ကယ့်မိန်းမက ချောတယ်နော်၊ ဘာညာနဲ့ သူကပဲ သဘောထားကြီးပြနေပြန်တယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ အသိစိတ်ထဲမှာကိုက နောက်မယားဖြစ်ရေးဟာ မှားယွင်းမနေဘူး။ ဒါကို မယားပြိုင်လို့ခေါ်တယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကို ဥပဒေက ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ အဲဒီလို ဥပဒေက ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ စာရိတ္တစံကို ရိုက်ချိုး ပေးထားတယ်။ ဒီလိုတိုင်းပြည်မှ ဖာနိုင်ငံမဖြစ်ရင် ဘယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ဦးမလဲ။
ဂီပြောတဲ့ (သဘာဝတရား အရ မတူညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ) ဆိုတာ တကယ်တော့ ဒီခေတ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိရှိသမျှ ဘုရားတွေ အကုန်စူးပါရစေရဲ့။ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေကသာ မျှစ်မတို့ မိန်းမတွေကို တော်တည့်မှန်ကန်စေမှာ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်း စော်ကားခံရမှုကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
PS ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြောင့် နော်ရှီးနဲ့ ပြတ်တယ်ဆိုတာ ဘ၀င်မကျပါ။ အချစ်က ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘောင်ကို ကျော်လွန်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ ခံစားချက်နောက်ကိုသာ လိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါတယ် ဂီဂီရေ။ အချစ်ဆိုတာ အရမ်းရှားပါးတဲ့အရာမို့ လက်လွတ်ခံရင် လူမိုက်။
ဆိုလိုရင်းက အဲ့သည့်မှာ စတွေ့တာပါပဲ…
ဥပဒေက ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တစံကို ရိုက်ချိုးထားတယ်
ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ပါပဲ …။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု .. ပညာတတ်မြောက်မှု .. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ကိစ္စက
ဆွဲချသွားတယ် လို့ မြင်မိပါတယ်…
မိန်းမတိုင်းဟာ သူ့ မိသားစု အိမ်ထောင်ရဲ့ … ချန်ပီယံတွေ.. ဂါးဒီးယန်းတွေ .. ဘုရင်မတွေပါ…။သူရို့ ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ right ပါ…
စကားစပ်လို့ပြောရရင်…သည်နေရာမှာ လူ၂ယောက် သွားသတိရတယ်…
ဒယ်မီမိုး ဂျီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ အင်ဒီးဆန့် ပရိုပိုဇယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် နဲ့ …
သွားလေသူ ဆြာမင်းလူရဲ့… ပါဆင့်တေ့ခ်ျ ဆိုတာ ..နှိုင်းရတန်ဖိုးဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်က ပမာဏ များလာရင်
များလာတဲ့အတိုင်း ယုံစားမရဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့သည့်၂ခု ကို အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ စာရိတ္တ ယိုင်နဲ့စေမယ့် ကိစ္စ ရပ်တွေကို
ယှဉ်ထိုးပြီးစ သတ္တုချကြည့်တော့ …။ ဘယ်လောက်အဆင့် ဘယ်လောက် ချို့တဲ့သူဟာ ..ဘယ်လောက်ပဲ အငတ်ခံနိုင်မယ်
ငတ်-သေ မခံနိုင်တဲ့အတွက် … ဘယ်လောက် ပမာဏမယ်တော့ … စံတွေအကုန် စွန့်ပါတယ် ဆိုတာမိုး ဖြစ်တတ်ကြတာ မလွဲပါဘူး…။
ဆိုတော့… တလင်တမယားဥပဒေ ထက် … အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရယ်… ပညာရေး ကျန်းမာရေးပိုင်း
ပိုမို စောင့်ရှောက်ဖေးမ မှုရယ်.. အဆိုးယ အနေနဲ့လိုအပ်တယ်ထင်ပါတယ်..
လက်ရှိ ခနော်နီခနော်နဲ့ ဥပဒေအရ … အပေါ်ကအချက်တွေ မပြည့်စုံသူတွေ …(ရေတိုနဲ့ …ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ၀င်အောင်းလိုက်ရင်
ချမ်းသာမယ် မှတ်တဲ့ ကလေးမတွေ) ပျက်စီးခြင်း လမ်းမကို တွန်းပို့ပေးနေသလိုပါ…။
သားအိမ်ကိစ္စ ရှော့ခ် တခု ရှိတာက …မြန်မာ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ အမွေခွဲဝေမှု တရားဥပဒေအပိုင်းက အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာ..။
(ဟိုမင်းသမီး ကိစ္စကိုပဲ ကြည့်) အမွေဖြတ် ကိစ္စ နဲ့ … သေတမ်းစာ အကျုံးမ၀င်တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် … သားအိမ်ကေ့စ်က သည်နေရာမှာ
တခြား တိုင်းပြည်နဲ့မတူဘဲ ..ပိုမို ထည့်သွင်း တွက်ချက် စဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းခည … (ဆက်မပြောတော့ဘု ..ကိုကိုဝီ အကြောင်းရောက်တော့မယ်)
တချို့ ကေ့စ်တွေဆိုရင် ပွေခဲ့ ရှုပ်ခဲ့သူ က သေတာ အရိုးဆွေးတော့မှ ..သားသမီး လက်ထက် .. မြေးမြစ်လက်ထက်မယ် …
တရားဆိုင်ရတုန်း ..(ဥပဒေ ၆၃မကျ တဲ့အကြောင်းပြောရရင်… အဲ့လိုအမှုမျိုးဆိုရင် .. ခွဲစရာအမွေသာ ကုန်မယ်..နောက်ဆုံး ဟိုလူမရသည်လူမရနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဗျား …ဟုတ်ပါတယ်… တလင်တမယား စနစ် ပေါ်ထွန်းသင့်ပါလိမ့်မယ်… ခုချိန်တော့မဟုတ်သေးဘူး ..။
အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ ခွင့်တူညီမျှမှုတွေ Quality of Life တွေ ..အဆင့်တခု ရှိလာပြီးမှ ပေါ်လာလည်းနောက်မကျသေးဘူးမလား..၊
ကျနော်တို့ဆီမယ်.. ဥာဏ်ပညာ နဲ့ စိတ်ဓါတ် အတွေးအခေါ်ပိုင်း ကမ္ဘာက လက်ခံထားတဲ့ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် တယောက် ရှိပါတယ်…။
ငြိမ်းချမ်းရေး …ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ …ခွင့်တူညီမျှ မှုတို့ …ကျန်းမာရေးပညာရေးတို့ … ထက်ပိုပြီး သည်ကိစ္စရပ်ကို ပိုမိုအလောတကြီး ဖြေရှင်းရမယ်ဟေ့ ဆိုတာမျိုး..
သူမပြောခဲ့ဖူးဘူး မှတ်ပါတယ်.. (အမှတ်မှားရင်ပြင်ပါ) ဆိုတော့ …သေချာတာက …
သည်ရွာထဲမယ် ..သည်အမယ်အိုလောက်တော့ …သီလ- စာဂ နဲ့ ဥာဏ်ပညာ ..အတွေ့အကြုံနဲ့ …နောက်ဆုံး…အုံးနှောက်တလုံးရဲ့ ခမ်းနားမှု မယ်…
ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်သာမို့ … သူမထောက်ပြသေးသမျှ မပြောသေးသမျှတော့… လူပြိန်း မိဂီ တွေးမိတာတော့ ..လက်တလော လိုကို မလိုအပ်သေးတဲ့ ဥပဒေ လို့ပဲမြင်မိပါရဲ့ …
P.S ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ ပြောရရင်တော့ … တွေ့မှ တွေ့တတ်ပလေ. .. လွဲမှ လွဲတတ်ပလေ ပေါ့ဗျာ …။
ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ပေါ်ကို မကောင်းခဲ့တာ မရှိခဲ့သလို .. ခုချိန်ထိလည်း တျောက်နဲ့တျောက် …အပြန်အလှန် တဘ၀စာ ချစ်နေကြတုံးပါပဲ …။
ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုအရ ကတော့ … လက်တလော …မယ်..ဆပ်ပြာသည်နဲ့ မီးသွေးသည် ဖြစ်နေတာကိုလည်း ၂ယောက်လုံး နားလည်ရင်းနဲ့ပေါ့…
်အသက်တစ်ရာမနေရပေမဲ့ အမှုတစ်ရာပွေရတတ်တယ်တဲ့။ ဗဟုသုတအလို့ငှာ fb ကတွေ့တာလေးကို ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဖြူ ။ ။လင်နဲ့မယားပိုင်တဲ့ “နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်း” တွေက ဘာတွေလဲဆရာ။ ဒီပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုခွဲဝေရသလဲ ပြောပြပါ။
ယူတီကေ ။ ။လင်ခန်း၊ မယားခန်း (ဖြစ်ခြင်း) အကြောင်း၊ လင်ခန်း၊ မယားခန်း (ပျက်ခြင်း/ပြတ်စဲခြင်း) အကြောင်း တွေကို ဆောင်းပါးရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ လင်ရယ် မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်း (အိမ်၊ မြေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ) (သားသမီးရတနာမပါ)ဆိုတာ ရှိလာပါတယ်။ လင်ခန်း မယားခန်း တည်မြဲနေသရွေ့ ကာလပတ်လုံး ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ –
“အတူပိုင်ဆိုင်ကြတယ်” (TENANTS-IN-COMMON) လို့ခေါ်တယ်။ “ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခြင်း” (JOINT TENANTS) နဲ့ မတူဘူး။ အတူ ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ အတူပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက်သေရင် သူ့ရဲ့အမွေဝေစုကို အခြားသူမရဘဲ သေသူရဲ့ အမွေစားအမွေ ခံကသာ ဆက်ခံရရှိတယ်။
ကိုဖြူ ။ ။ နည်းနည်းပိုပြီးရှင်းပြပါ။
ယူတီကေ ။ ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လင်နဲ့မယားဟာ ပစ္စည်းခန်းမှာ အတူပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ ပေါင်းသင်းနေစဉ်ဖြစ်စေ လင်ခန်းမယားခန်း ပြတ်စဲကွားရှင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ သူတို့ရမယ့် ဝေစုဟာ ပေါင်းသင်စဉ်က ဝေစုအတိုင်း ရရှိကြတယ်။ မိမိ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝေစုကို သီးခြားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်။ အမွေဆိုင်တစ်ယောက်သေဆုံးရင် အခြားသူ အမွေမရဘူး။ သေသူရဲ့ အမွေစားအမွေခံများသာ အမွေရတယ်။ လင်နဲ့မယားမှာ လင်ဟာ မယားရဲ့ အမွေခံပဲ။ မယားဟာ လင်ရဲ့အမွေခံပဲ။ ဒါကြောင့် လင်သေရင် မယားပဲရတယ်။ မယားသေရင် လင်ပဲရတယ်။ သားငယ် သမီးငယ်တွေ တခြားဆွေမျိုးတွေ မရနိုင်ဘူး။
၁။ ပါရင်းပစ္စည်း။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမပြုမီ လင်ဖြစ်စေ၊ မယားဖြစ်စေ၊ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်း၊ ဒါ့အပြင် ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ ပြတ်စဲပြီး ဒုတိယအိမ်ထောင်မပြုမီ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်း။ (ပါလာတဲ့ပစ္စည်း) = ပါရင်း။
၂။ အမွေရလက်ထက်ပွားပစ္စည်း။ လင်မယားပေါင်းသင်းနေတုန်း လင် သို့မဟုတ် မယားတစ်ဦးတည်း အမွေရတဲ့ပစ္စည်း။
၃။ ခန်းဝင်ပစ္စည်း။ မင်္ဂလာဆောင်ချိန်မှာ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေများက ပေးကြတဲ့ပစ္စည်း၊ ဒါ့အပြင် သတို့သားက သတို့သမီး ကို နှစ်ဦးအကျိုးအတွက် ပေးတဲ့ပစ္စည်း။ ခန်းဝင်ပစ္စည်းဟာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နှစ်ပါးစုံပစ္စည်း ဖြစ် သွားတယ်။
၄။ နှစ်ပါးစုံပစ္စည်း။ လင်နဲ့မယားနှစ်ပါး စုံစုံညီညီ ကြိုးပမ်းအားထုတ် ရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်း။
၅။ သာမန်လက်ထက်ပွားပစ္စည်း။ လင် သို့မဟုတ် မယားတစ်ဦးတည်းရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ ရတဲ့ပစ္စည်း။
၆။ အထက်ပါပစ္စည်း။ အိမ်ထောင်ကျဖူးသူ အိမ်ထောင်ကြီး အချင်းချင်း လက်ထပ်တဲ့အခါ အိမ်ထောင်သစ်သို့ ပါလာတဲ့ပစ္စည်း။
(ရှေးယခင်က မင်းပေးပစ္စည်း (မင်း/ဘုရင် ပေးသနားသောပစ္စည်း) ရှိခဲ့တယ်။ ယခုခေတ်၌မရှိတော့ပါ။ သင်းသီးပစ္စည်း (တစ်ယောက်တည်း သီးခြားပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်း) ယခု ဤသို့ သီးခြားပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိတော့ပါ။
ပေါင်းသင်းစဉ် လင်နှင့်မယားတို့ ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်။
၁။ ပါရင်းပစ္စည်း၊ အမွေရလက်ထက်ပွားပစ္စည်း အပေါ်မှာ ပစ္စည်းပါသူ၊ အမွေရသူက သုံးပုံနှစ်ပုံ၊ ကျန်တစ်ဦးက သုံးပုံ တစ်ပုံ ရရှိတယ်။ (အတိုမှတ် – ပါရင်း + အမွေရ – ရသူက သုံးပုံ နှစ်ပုံ ) (၂/၃)
၂။ ခန်းဝင်ပစ္စည်း၊ နှစ်ပါးစုံပစ္စည်း၊ သာမန်လက်ထက်ပွားပစ္စည်း အပေါ်မှာ လင်နဲ့မယားအညီအမျှ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိကြတယ်။ (၁/၂) (အတိုမှတ် – ခန်းဝင် ၊ နှစ်ပါး၊ သာမာန်ပွား အညီအမှု)
၃။ အထက်ပါပစ္စည်း၊ အထက်ပါပစ္စည်းဟာ ပါရင်းပစ္စည်းကဲ့သို့ မဟုတ်ဘူး ဘယ်အခါမှ လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ် ဘူး။ အိမ်ထောင်ကြီးအချင်းချင်း ထိမ်းမြားရင် တစ်ဦးရဲ့အထက်ပါပစ္စည်းကို ကျန်တစ်ဦးက အကျိုးခံစားခွင့် မရှိဘူး။ အကြောင်း မှာ အိမ်ထောင်ဟောင်းက အထက်ပါသားသမီးများရဲ့ အကျိုးကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်တယ်။ (အတိုမှတ် – အထက်ပါ၊ မဆိုင်ပါ)၊ (မယားပါ ပစ္စည်း၊ မယားပါသမီး ကိုယ့်ပစ္စည်း မဟုတ်)
လင်မယားကွာရှင်းပြတ်စဲရင် ရရှိမယ့်လင်နဲ့ မယားတို့ရဲ့ဝေစု
လင်မယားပြတ်စဲရင် ရရှိမယ့်ဝေစုဟာ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လင်မယားပေါင်းသင်းစဉ် ရရှိမယ့် ပိုင်ဆိုင်အကျိုးခံစား ခွင့် အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကွာရှင်းကြတဲ့အခါ လင်ခန်းမယားခန်း ပျက်ပြယ်ကြတဲ့အခါမှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်စားကြရ တယ်။
(က) နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းခြင်းလား။
(ခ) သာမန်အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကြောင့် ကွာရှင်းခြင်းလား။
(ဂ) ကြီးလေးသော အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကြောင့် ကွာရှင်းခြင်းလား။
(က) နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းခြင်းနှင့် (ခ) သာမန် အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကြောင့် ကွာရှင်းခြင်းဖြစ်ရင် ပေါင်းသင်းစဉ်က ဝေစုအ တိုင်း ပစ္စည်းခွဲဝေရတယ်။ (၁/၃) (၁/၂) ပုံ။
(ဂ) ကြီးလေးသော အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကြောင့် (မယားဖောက်ပြန်မှု ကြီးလေးသော ရက်စက်မှု) ကြောင့် လင်ခန်းမယား ခန်း ပျက်ပြယ်ပြတ်စဲရင်-ကွာရှင်းသူ လင်နဲ့မယားဟာ – ငယ်လင် ငယ်မယား (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ကြီးနဲ့အပျို၊ လူပျို လင်မယား ဖြစ်ရင် – ကျူးလွန်သူ ဟာ (ခန်းဝင်၊ နှစ်ပါး၊ သာမန်ပွား၊ ပါရင်း၊ အမွေရလက်ထက်ပွား) ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ် မိမိရဲ့ ဝေစု ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ကြီး အချင်းချင်း ကြီးလေးတဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကြောင့် ကွာ ရှင်းပြတ်စဲရင်၊ အထက်ပါပစ္စည်း အပေါ်ပါလာသူက ပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်။ အကြောင်းကတော့ အထက်ပါပစ္စည်းဟာ အိမ်ထောင် သစ်က ဇနီး၊ ခင်ပွန်းမှာ ပိုင်ခွင့် မရှိလို့ဖြစ်တယ်။ အိမ်ထောင်ဟောင်းက သားသမီးများဟာ မိဘပြစ်မှုကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ အမွေခံ စားခွင့် မဆုံးရှုံးဘူး။ မိဘအပြစ်ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ဟောင်းက သားသမီးများအကျိုးကို မထိခိုက်စေရဘူး။ ဒါကြောင့် လင်မယားတို့ ကွာရှင်းပုံနည်းလမ်းကို စဉ်းစားပြီးမှ ပစ္စည်းခွဲဝေရခြင်းဖြစ်တယ်။ (သာမန်အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှု- (၅)မျိုးကို ယခင် တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။) (အတိုမှတ် – လီဆယ်၊ ဖောက်ပြား၊ နောက်မယားချစ်၊ စွန့်ပစ်၊ ရက်စက် ဤငါးချက်။)
၂။ လင်မယားနှစ်ဦးရဲ့ အနေအထား
(က) ငယ်လင် ငယ်မယားလား (ပျို+ပျို) (အို+ပျို)
အပျိုနဲ့လူပျို လက်ထပ်ရင် ငယ်လင်ငယ်မယားခေါ်ပါတယ်။ (ပျို+ပျို) အိမ်ထောင်ကျဖူးသူ (မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ၊ တစ်ခုလပ်၊ တစ်လင်ကွာ) (အို) နဲ့ အပျို၊ လူပျို လက်ထပ်ရင်လည်း ငယ်လင်ငယ်မယားလို ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိတယ်။ ပစ္စည်းခွဲရင်လည်း ငယ်လင်ငယ်မယားလို ခွဲဝေရပါတယ်။ (အို+ပျို)
(ခ) အိမ်ထောင်ကြီး လား (အို+အို)
(၃) နိဿယနဲ့ နိဿိတအနေအထားလား (ထောက်ပံ့သူနဲ့ မှီခိုသူ)
ပစ္စည်းပါလာသူ၊ အမွေရသူကို နိဿယ (ထောက်ပံ့သူ) ခေါ်တယ်။ ၄င်းက ဝေစု(၂/၃) ပုံရသည်။ ကျန်တစ်ဦးကို နိဿိ တ (မှီခိုသူ)ခေါ်တယ်။ ၄င်းက ဝေစု (၁/၃)ပုံရတယ်။
ကိုဖြူ ။ ။ အပျိုနဲ့လူပျို လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက် သူတို့ကွာရှင်း ပြတ်စဲသွားကြတယ်။ နောက် သူတို့ပြန်ပြီး ပေါင်းသင်းသွားကြပြန်တယ်။ သူတို့ကို ငယ်လင်ငယ်မယားခေါ်မလား၊ (အအို+အအို) ဆိုပြီး အိမ်ထောင်ကြီးလို့ ခေါ်မလား။
ယူတီကေ ။ ။ ငယ်လင်ငယ်မယားဆိုတာ (ပျို+ပျို)ကိုခေါ်တယ်။ နောင်မှာ (အို+ပျို)ကိုလည်း ငယ်လင်ငယ်မယား လို့ အသိအမှတ်ပြုလာတယ်။ (မအေးညွန့်နှင့် မောင်တုတ်ဖြူ စီရင်ထုံး – ၁၉၈၇-၁၉၀၁)
“ငယ်လင်ငယ်မယားတို့ ကွားရှင်းပြီးနောက် သူတို့အချင်းချင်း ပြန်လည် ပေါင်းသင်းလျှင်လည်း ငယ်လင်ငယ်မယားပင် မည်၏” လို့ (မိဆိုင်နှင့် ငရန်ကင်းစီရင်ထုံး ၁၉၁၄-၁၆) မှာ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ကိုဖြူ ။ ။ ဆရာပြောတဲ့ “လင်သေရင်မယား၊ မယားသေရင်လင်” ဟာ အမွေခံဆိုပေမယ့် – မယားအများရှိရင် ကော ဆရာ။ သြရဿ သားသမီးရှိရင်ကောဆရာ။ တစ်ဦးတည်းသော အမွေခံဟုတ်ပါ့မလား။
ယူတီကေ ။ ။ (က) တစ်ဦးတည်းသောမယား ကျန်ရစ်ခဲ့မယ်။ (ခ) သြရဿသားသမီးလည်း မကျန်ရစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျန်ရစ်သူဟာ တစ်ဦးတည်းသော အမွေခံဖြစ်ပြီး သူပဲ အမွေရတယ်။
မယားအများကျန်ရစ်ရင်တော့ ကျန်ရစ်သူမယားများရဲ့ အမွေဝေစု (အကျိုးခံစားခွင့်)ဟာ ပုံသေသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ ကျန်ရစ်သူ မယားများ (ပထမ မယား၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ၊ ဒဿမ မယား စသည်တို့) ဟာ သူ့ဝေစုအတိုင်း ဆက်ခံခွင့်ရကြ တယ်။ ရပ်ဆိုင်း၊ နှုတ်ပယ်၊ ရုတ်သိမ်း၊ ပယ်ဖျက်လို့ မရဘူး။ ဒီလို ကိုယ့်ဝေစုနဲ့ကိုယ် ပိုင်ခွင့်ရှိနေတာကို “ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်တယ်” လို့ ခေါ်တယ်။
အလားတူပဲ။ သြရဿသားသမီး ကျန်ရှိနေတယ်ဆိုရင်၊ သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့် (၁/၄)ပုံဟာ “အပြီးအပိုင်ရတဲ့ဝေစု” ဖြစ်တယ်။ သက်ဆိုင်သူ မိဘ သေဆုံးချိန်မှာ သူဟာ ကျန်ရစ်သူမိဘနဲ့တူ အမွေဆိုင်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် လင်သေမယားဆိုတဲ့မူဟာ သြရဿသားသမီး မကျန်ရစ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောမယားအတွက် ပြောတာပါ။
ကိုဖြူ ။ ။ သေသူမိဘမှာ သြရဿသားသမီး မကျန်ဘူး။ သားငယ်သမီးငယ်တွေ (ကနိဌ)ပဲကျန်ရင် အမွေဘယ် အခါ ရနိုင်သလဲ။
ယူတီကေ ။ ။ ကျန်ရစ်သူမိဘ “နောက်အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အချိန်” ကျမှ တစ်ဝက်ရမယ်။ မြန်မြန်အမွေ ရချင်ရင်တော့…
ဗဟုသုတအတွက် တင်ပေးလိုက်တာ ကျေးဇူးပါ ကိုနေးချားရေ။
ဥပဒေတွေက ရှုပ်လိုက်တာနော်။ ဒီဥပဒေတွေဟာ တကယ်ပဲ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ထက် ပိုကောင်းနေတာလားဟင်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ.. ဘုရင်တွေက မိန်းမတပုံကြီးယူတော့.. ဘုရင်ရုးရုးတဲ့ သူတွေက.. အဲဒါမျိုးကို လှည့်ပါတ်အကာအကွယ်ပေးပြဌာန်းတယ်..။
ဦးနေ၀င်းကြီးများဆို.. မိန်းမနဲ့ပါတ်သက်ရင်.. သူလိုချင်တဲ့ဥပဒေသူလုပ်ပစ်တာ..
အဲဒါကိုလိုက်နာရင်.. ကောင်းမယ်..။ တိုးတက်မယ်..။ :buu:
မမပြုံး မီးလည်း တစ်​လင်​တစ်​မယား စနစ်​ကိုပဲအား​ပေးတယ်​။ ကွာချင်​အကုန်​ခွဲပြီးကွာ။ သံ​ယောဇဉ်​ကုန်​သွားမှ​တော့ ဆွဲမထားပါဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ ကွာပြီး​သေ​သေချာချာရှင်းလင်းပြီးမှ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ထပ်​ယူပါ။ က​လေးကိုလည်းတစ်​​ယောက်​တည်းက အပိုင်​စီးထားတာမကြိုက်​ပါဘူး။ မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်း​တွေ ထည့်​တွက်​စရာမလိုပါဘူး။ ကို​ရွေးချယ်​တဲ့လမ်းပါ။ ဒါ​ပေမဲ့ ကိုယ့်​က​လေးအတွက်​ စိတ်​ဒါဏ်​ရာ မရ​စေပဲ အ​ကောင်းဆုံးကာကွယ်​​ပေးခဲ့မယ်​။ သူ့ကိုလည်း ယုံကြည်​ချက်​ရှိရှိ သူ့လမ်းသူ​လျှောက်​​စေမယ်​။
ကိုယ်​က​တော့ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ယူပြီး သူကျ​တော့မယူရ​အောင်​ မ​ကောင်း​ကြောင်း​တွေ​လျှောက်​မ​ပြောသင့်​ဘူး။
အိုင်းရစ္စလည်း အတွေ့အကြုံ ရှိသေးပုံမရဘူး။ တကယ့်ပြသနာက ဒီ့ထက်ပိုရှုပ်ထွေးပြီး ကောက်ကျစ်မှု ဦးစီးထားပါတယ်။ မပြုံး ပြောမယ်။ ဘယ်တော့များမှ သူများအငယ်အနှောင်း မလုပ်နဲ့။ ဒီ့ထက် အောက်တန်းကျတာ မရှိဘူး။ ပြည့်တန်ဆာမှာ သိက္ခာဆိုတာ ရှိတယ်။ သူများအငယ်အနှောင်းကတော့ တည့်တည့်ပြောရရင် ပိုင်းလုံးပါပဲ။ ကံမကောင်းလို့ အိမ်ထောင်ရှိယောက်ျားနဲ့မှ သံယောဇဉ်ဖြစ်မိရင် သိပ်ချစ်နေကြတယ်ဆိုရင် တိတ်တိတ်ပုန်းယူကြ။ တိတ်တိတ်ပုန်း မယူနိုင်ဘူး၊ ကိုယ့်မာနနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်လည်း စကတည်းက သူများယောက်ျား မျက်စောင်းမထိုးနဲ့ပေါ့။ အိမ်ထောင်ရှိယောက်ျား သူ့ကိစ္စသူရှင်းပါစေ။ အားလုံးပြီးစီးသွားမှ ကိုယ်နဲ့ယူကြရင် မယားကြီးကလည်း ကျမသာလျှင် မယားကြီးပါဆိုပြီး သတင်းစာထဲထည့်တာမျိုး မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ လုပ်ခဲ့ရင် ကိုယ်ကလည်း အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားပြန်စွဲရုံပဲ။
တကယ်ပြောတာပါ ညီမရယ်။ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေကသာ မြန်မာမတွေကို ကယ်မှာပါ။ perfect မဖြစ်ပေမယ့် မယားပြိုင်ဥပဒေထက်တော့ အများကြီးကောင်းပါတယ်။
တရားဥပဒေဆိုတာလေးနက်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိဖို့ ဦးစားပေးဖို့လိုမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ တရားဥပဒေဆိုတာ လေးနက်ကျယ်ပြန့်ပြီးနစ်နာသူတွေဘက်က အကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဥပဒေကို အရည်ကြိုသောက်ထားသူတွေတချို့က ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်အချို့ ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ဥပဒေကိုလက်တစ်လုံးခြား လုပ်မှုတွေကြောင့်တရားရုံး၏ အမိန့်သည်ပြည်သူကိုမနစ်နာစေသင့်ပါကြောင်း ။
Tun Myo Htay
ဆရာ၊ ဆရာမ များခင်ဗျာ လမ်းညွှန်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အမှုက ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ – ၄၂၇ အရ အမှုပါ ။ တရားလို A က တရားခံ B နှင့် C ကို စွဲတာပါ။ ပြသနာက တရားခံ C ကခိုင်းလို့ သစ်ဆွဲသမား B က တရားလို A ရဲ့ အပင်ကို အခဖြင့် ခုတ်ခဲ့ရကြောင်း အမှုတွဲ၌ ပေါ်ပါတယ်။
တရားလိုကလည်း B သည် သစ်ဆွဲ သမားဖြစ်ကြောင်း နှင့် အလုပ်ရှင် C ခိုင်းလို့သာ အချင်းဖြစ် A၏ အပင်ကိုခုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း နှင့် ၄င်းပိုင် အပင်မှန်း B မသိသည်မှာ မှန်ကြောင်း ပြန်လှန်စစ်မေးချက်မှာ ၀န်ခံထားပါတယ်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ – ၄၂၅ ရဲ့ အဓိက အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည့် ဆုံးရှုံးခြင်း ၊ ပျက်ဆီး နစ်နာခြင်း ဖြစ်စေရန် ကြံရွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ သိလျက်နှင့်သော်လည်း B သည် ငြိစွန်းချက်မရှိလို့ B ကိုလွှတ်ရပါတော့မယ်။
(က) B အားလွှတ်ရမည့် အခြေအနေမှာ(၀ါ) မူရင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏
ပြုလုပ်မှု ပြစ်မှုမမြောက်သည့် အခြေအနေမှာ
သစ်ပင်ခုတ်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့် A ပိုင်ပစ္စည်းမှန်းသိလျက် ခုတ်ရန်စေခိုင်းသူ C ကို အားပေးကူညီသူအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်စေသင့်ပါသလား။ (သို့မဟုတ်) C ကိုမည်သည့် ပြစ်မှုဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်သင့်ပါသလဲခင်ဗျာ။
Tun Myo Htay —B နှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြစ်မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ စေခိုင်းသူ C ကို ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမလဲ အဓိကသိချင်မိတာပါဆရာ။
U TA Yar Truely— C သည် ပစ္စည်း အပေါ်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိ
သည်ကို သိရှိသည့် အပြင် A၏ ပစ္စည်း ဟု
ယုံကြည်ရန် အကြောင်း ရှိသည်ကို B က
သိလျှက် ပိုက်ဆံရလို၍ အပင်ခုတ် ခဲ့လျှင်
အကျိုးဖျက်ဆီးမှု ကျုးလွန်ရာ ရောက်သည်။
U TA Yar Truely —C အပေါ် လား ခိုင်းစေသူ ဖြစ်လို့ ဒဲ့ဆော်သင့်
U TA Yar Truely —ပုဒ်မ၃၄ သဘောတရား အတိုင်း ဖြစ်သင့်
Royal Ruby— ရှေ့နေငှားလိုက်ပါ
Tun Myo Htay —ဆရာ U TA Yar Truely ခင်ဗျာ။ ပြစ်မှုပုဒ်မ – ၃၄ ဖြစ်ဖို့က B ပြစ်မှုကျူးလွန်မှဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့ပြင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ၌ ကိုယ်တိုင်ရှိမှသာတူညီသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်မှာပါ။ C က သစ်ပင်ခုတ်တဲ့နေရာကို မပါလာပါဘူး။ ပြစ်မှုပုဒ်မ – ၃၄ မဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ ရည်ညွှန်းချက်က ဦးလာဘ နှင့် ပထစ (၁၉၇၉၊ မတစ၊စာ ၁၃၈) ပါ။
Royal Ruby— မင်းကိုယ်တိုင်သိရင် မမေးနဲ့ပေါ့ကွ
U TA Yar Truely— ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ
Tun Myo Htay— ဆရာ Royal Ruby ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကို ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့အရာ နှင့် ဟိုပြဌာန်းချက်ထဲလည်း အကျုံးမ၀င်၊ ဒီပြဌာန်းချက်ထဲလည်း အကျုံးမ၀င်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာ ဥပဒေ သမားတိုင်း ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ကြတာပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်အတိအကျသိနေရင် မေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ တင်ပြချက်ပုံစံဖြင့်တင်မှာပါဆရာ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေလို့ မေးခွန်းပုံစံဖြင့် အကြံဥာဏ်တောင်းခံတာပါဆရာ။
Royal Ruby— intention မရှိရင် မရဘူးကွ ပုဒ်မ ၄၂၅ မင်းဖတ်ပြီးပြီလေ
Tun Myo Htay —ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ ဖတ်ပြီးပါပြီ။
U TA Yar Truely ကိုယိတိုင်မပါ တာကို စာဖတ်ရှမ်း သွားတယ်
U TA Yar Truely —သူက အမြဲတမ်း ပုစ္ဆာ မေးနေကြ စာဖတ်
U TA Yar Truely—သူများကို အပင်ခုတ် ခိုင်းတယ် ဆိုတော့
ခုတ်ရမယ့် အပင်ကို အနားမှာ ညွှန်ပြမယ်
Wai Hin— ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၀၉ ကို ဖတ်ကြည့်ပါ ဂဠုံ ဦးစော ကိုတွဲခဲ့တဲ့ ပုဒ်မ ပါ ပဲ ရှင်းသွားလိမ့်မယ်
Wai Hin— ၁၁၄ ။ ၃၄ တို့ နဲ့ ၁၀၉ ကွဲသွားတာက ၁၀၉ က ကိုယ်တိုင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှာ ရှိစရာ မလိုပါဘူး အားလုံး တွဲဖတ်ကြည့်ပါ
Tin Maung Soe —ကျနော်ကတော့ ဥဒေကိုသိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ကိုယ်မြင်တာပြောကြည့်မယ်နော်။
A ရဲ့အပင်ကို B ကခုတ်တယ်။ Cကစေခိုင်းတယ်လို့ယူဆရတယ်။ သစ်ခုတ်တဲ့နေရာမှာ Cကပါမလာဘူး။ Aရဲ့အပင်ကိုခုတ်ပြီဆိုကတည်းက ပြစ်မှုမြောက်နေပြီလို့ယူဆပါတယ် ။ ဒီအပြစ်ဟာ B လား C လားဆိုတာ ကိုခွဲခြားရမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ ခိုင်းသူရှိလို့ခုတ်တယ်ဆို ခိုင်းသူရှိလို့ခုတ်တယ်ဆို ခိုင်းတဲ့သူအပြစ်။ ခိုင်းသူမရှိရင် ခုတ်သူအပြစ်။
အခုဟာက ခုတ်သူဟာ ခိုင်းလို့လုပ်ရတာ အပြစ်မရှိဘူး။ ခိုင်းတဲ့သူအပြစ်ဖြစ်ဖို့ ခုတ်တဲ့သူက အပြစ်ရှိမှခိုင်းတဲ့သူက အပြစ်ရှိမယ်ဆိုတော့ အကုန်လွှတ်ရမလိုဖြစ်နေသလားလို့ပါ။
Zawmyo Min— ဆရာ ကို Wai Hin ထောက်ပြတာတွေ နဲ့ ကိုက်ညီမယ်လို့ထင်တယ်
Tun Myo Htay —ဆရာ Wai Hin ခင်ဗျာ။C က ပြုလုပ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျပြုလုပ်ခဲ့သူမဟုတ်တော့ ပြစ်မှုပုဒ်မ – ၁၀၇ အရ အားပေးကူညီမှု ထဲပါပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့နေရာမှာ မရှိတော့ ပြစ်မှုပုဒ်မ – ၁၀၉ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူရင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ပြစ်မှုမမြောက်တဲ့အနေအထား မှာ အားပေးကူညီသူကို အားပေးကူညီခြင်းပြစ်မှုဖြင့့် ပြစ်ဒဏ်ပေးရမရ သိချင်တာပါဆရာ ။ ဂဠုန်ဦးစောအမှုက မူရင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူရှိပါတယ်။ မူရင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေပြစ်မှုထင်ရှားလို့ အားပေးကူညီမှုနောက်ကလိုက်သွားတာပါ။ မူရင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ပြစ်မှုမမြောက်ဘဲ အားပေးကူညီသူကိုသာ ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ အထောက်အထားကို သိချင်တာပါဆရာ။ လမ်းညွှန်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဆရာ။
A Lwan Thwe Pachi —သုံးသိန်းအောက်ပေးလိုက်ပါ..-:P
Tin Maung Soe -သက်သာတယ်….အဲ….ဒါနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မတပ်လို့ရတယ်နော်…
ဒီအမှုက ရာဇ၀တ်မှုမြောက်အောင် အားပေးကူညီမှုထက်ပိုတဲ့ အခပေးစေခိုင်းမှု လို့ယူဆရင်ကောဖြစ်နိုင်မလား။
A Lwan Thwe Pachi –ဘာလဲဥပဒေကခွင့်ပြုထားတာကိုမလိုက်နာတာလား….!!!ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်လည်းပြစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်တယ်နော်..-:P
Tin Maung Soe —နည်းနည်းလျှာ ထပ်ရှည်မယ်နော်။ A ရဲ့အပင်ကို B ကခုတ်တယ်။ Aပိုင်ဆိုင်တဲ့အပင်ကို Bကခုတ်တဲ့အတွက် ရာဇ၀တ်မှုမြောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Bကလည်း သူလုပ်ချင်လို့ဆိုရင်တော့သူ့အပြစ်။ B က Cပိုင်ပစ္စည်းကို C ကခုတ်ခိုင်းတယ်လို့ယူဆပြီးခုတ်တယ်။ တကယ်တော့ C ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ C ပိ…See More
A Lwan Thwe Pachi — အဓိကကမူရင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူကပြစ်မှုမမြောက်ဘဲအားပေးကူညီသူကိုသာပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အထောက်အထားဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍နားလည်သမျှရှင်းပြချင်တာကဘယ်လိုမှလည်းမဖြစ်နိုင်သလိုဥပဒေအရလည်းအပြစ်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်
Tin Maung Soe — ဥပဒေကို အရည်ကြိုသောက်ထားပြီး ဥပဒေလက်တစ်လုံးခြားလုပ်နေကြတယ်ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို သူများပိုင်တဲ့အပင်ကို အခကြေးငွေပေးပြီးသွားခုတ်ခိုင်းရင် ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူမှတရားစွဲမရပဲ ငုတ်တုတ်မေ့မဲ့ကိန်းပဲ။
A Lwan Thwe Pachi — ခုနကပြောတဲ့2007စီရင်ထုံးမှာကအဓိကတရားခံမကိုစစ်ဆေးစီရင်ခွင့်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတောင်အားပေးကူညီတယ်လို့ယူဆတဲ့သူကိုအပြစ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်အမှုလည်းစစ်ပြီးပြစ်မှုလည်းမမြောက်တဲ့စွပ်စွဲခံရသူကိုထပ်မံအားပေးကူညီပါတယ်ဆိုတဲ့အားပေးကူညီသူကိုမှုနဲ့အပြစ်ပေးဖို့ဥပဒေရအားနည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်
Tun Myo Htay — ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ ကျနော်အခု အထပ်ထပ်ဖတ်ကြည့်နေပါတယ်။
Yan Paing Soe— ပြစ်မှုပုဒ် မ-107/109
သက်သေခံပုဒ်မ-133 တွေနဲ့အကျုံးဝင် ပါလိမ့်မယ်။
Tun Myo Htay —ဆရာ Yan Paing Soeခင်ဗျာ။ငွေပေးပြီးလူသတ်ခိုင်းတာ သွားသတ်တဲ့လူက ပြစ်မှုမြောက်နေတယ်လေ။ ဒါကြောင့် နောက်က အားပေးကူညီသူတွေ အပြစ်ပေးလို့ရတာ အငြင်းပွားရန်မရှိပါဘူး ။ အခုပိုစ်မှာက ကိုယ်တိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက ပြစ်မှုမမြောက်လို့ နောက်ကလိုက်ရမည့် အားပေးကူညီမှုက ပြသနာဖြစ်တာပါ။ C ကို ပြစ်မှုပုဒ်မ – ၄၂၇ / ၁၀၉ အရ အပြစ်ပေးဖို့ ရှေ့က ၄၂၇ ကို ကျူးလွန်သူရှိဖို့လိုဦးမယ်ထင်မြင်မိတာပါ။
Pyi Lone — အပင်ကဘာအပင်တုန်း သေးလားကြီးလား ဘယ်နေရာမှာလဲ။မန္တလေးမှာဆိုရင် ကိုယ့်ခြံဝင်းထဲကအပင်ကိုကိုယ့်ဖာသာခုတ်ချင်သလိုခုတ်လို့မရဘူး။ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှခုတ်လို့ရတယ်။အပင်ကြီးရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တင်ပြီးခုတ်ခွင့်ပြုမှခုတ်ရတယ်။ခွင့်မပြုဘဲခုတ်ရင်စည်ပင်ကအရေးယူတယ်။
Wai Hin— ပြစ်မှု လုပ်တဲ့သူက ပြစ်မှု မမြောက်ရင် ခိုင်းတဲ့သူ ကအပြစ်မရှိ ရတော့ဘူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဥပမာ ၇နှစ်အောက် ကလေးတစ်ယောက်ကို လူတစ်ယောက်က အဆိပ်ထုပ်ပေးပြီးခတ်ခိုင်းတယ် ကလေးရဲ့ ပြုလုပ်မှုဟာ ပြစ်မှုမမြောက်သော်လည်း ခိုင်းစေသူကတော့ ၃၀၂ သို့မဟုတ် ၃၀၇ ကို ကျူးလွန်ပြီလေ စွဲရင်တော့ ၁၀၉ တွဲရမှာပေါ့ လှုံဆော်တာ တမင်ကူပံ့တာလေ
Tin Maung Soe — ကလေးရဲ့ အလုပ်ဟာပြစ်မှုမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ဥပဒေလက်တလုံးခြားလုပ်သူတွေတွေ့ဖူးတယ်။ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းကို ပြောင်းခါစက ညဘက်ပွဲရုံတွေအဖောက်ခံရတယ်။ ချောင်းဖမ်းတော့မိတယ်။မိတာက ကလေးတွေ ။ ရဲစခန်းသွားအပ်တော့ ခဏနေလွှတ်လိုက်တာပဲ။ ဒီဥပဒေကိုသိတဲ့လူကြီးတွေက နောက်ကနေစီစဉ်ပေးကြတယ်ထင်တယ်။ နောက်နေ့ အဲဒီ ကလေးတွေပြန်တွေ့နေရတာပဲ။ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။
ကိုနေချားရေ …. အထက်က ဂီဂီပြောသလိုပါပဲ။ ဥပဒေဆိုတာ perfect ဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လေ မယားပြိုင်ဥပဒေကြီးကတော့ တော်တော်ကို ဆိုးရွားလွန်းတာပါ။ ဒီခေတ်အတွက်ဆိုရင် ပိုတောင်ဆိုးရွားပါသေးတယ်။
ပစ္စည်းခန်းခွဲဝေမှုမှာ ဥပဒေတွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လုပ်၊ ကျမပြောချင်တာက dignity ပိုင်း။ အဲဒါကြီးမှာ ယောက်ျားနဲ့ မ်ိန်းမကို ခွဲခြားထားတယ်။
မထင်နဲ့ မပြုံးရေ… အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ လိုက်ကပ်တဲ့…
ဘာတဲ့ ခွါချင်ရင်လွယ်တယ် ၊ ပိုက်ဆံကျတယ် ၊ မတော်ယူလိုက်ရရင်လည်း အသင့် တဲ့…
အဲ အမွေဖြတ်တာကတော့ ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးပါတယ် ၊ လမ်းဘေးမှာ ဘွပျက်တာပဲ…
ဟို ငနဲလို အကွက်ရွှေ့တာတော့မဟုတ်… ၃နှစ်လောက် ကော့နေတာပဲ…
ကိုကျောက်စ် မပြုံး ပို့စ်ကို သေချာပြန်ဖတ်နော်။ ဒီခေတ်မှာ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ မိန်းခလေးတွေ ကပ်ကြတာ။ လူလွတ်ကိုယူရင် ယောက္ခမဒဏ်ခံရဦးမယ်လေ။ ငွေကြေးမက်မောမှုကို အခြေခံတဲ့ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်မှုကို မမြင်နိုင်ကြတာ ဘာကြောင့်များလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ သဘောတရားတွေနဲ့ ဟုန်သွားလို့ဖြစ်မယ်။
ကိုနေးချားကို အားနာပေမယ့် စကားမကျန်ရအောင်ပဲ ပြောပြချင်ပါတယ် ကိုနေးချားရေ။ ကိုနေးချား တင်ပေးတဲ့ အမွေခွဲနည်းတွေဟာ ဥပဒေစာအုပ်ထဲမှာပဲ စာလုံးအဖြစ်ရှိနေတာပါ။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှု မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ကို အထက်ပါပစ္စည်းလား၊ ပါရင်းလား၊ လက်ထက်ပွားလား ခွဲခြားဖို့ သိပ်ခက်တယ်။ ဥပမာ အမွေရငွေကြေးနဲ့ လက်ထက်ပွားကို ပေါင်းစပ်ပြီး အိမ်မြေ၀ယ်ရင် အဲဒါကို ဘယ်စာရင်းထဲသွင်းမလဲ။ ဘယ်စာရင်းထဲသွင်းသွင်း အသေချာ အတိကျဆုံးကတော့ မယားကြီးဟာ ထမင်းအိုးခွဲခံလိုက်ရပြီ။ ထမင်းအိုးအခွဲမခံချင်ရင် ဒီယောက်ျားကိုပဲ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ ဆက်ပေါင်းရုံ။ အဲဒီမှာ diginity ကို ကျမပြောတာ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်လင်တစ်မယားစံနစ်မသတ်မှတ်ပေမဲ့လည်း မြန်မာပြည်မှာအများစုက တစ်လင်တစ်မယားပဲရှိနေကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာလည်းအမြဲတန်း စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဘွယ်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တခါတလေ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေရင် ယောကျာင်္း ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပျော်ရွှင်မှု စိတ်ထွက်ပေါက်ကိုရှာတတ်လေ့ရှိပါတယ်။ တဦးကိုတဦးသည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းနဲပါးတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ကွဲလွယ်ပျက်လွယ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကွဲလွယ်ပျက်လွယ် ဖောက်ပြန်လွယ်တာကြောင့် ကာမေသုမိစ္ဆာရာဆိုတဲ့ သူတပါးအိမ်ထောင်ကိုဖျက်ဆီးတာအပြစ်ကြီးတယ်လို့ အခြေခံ ၅ပါးသီလမှာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူတိုင်းပေးတေးဖြစ်ဆိုတာလို ရွတ်ဆိုရုံသာရွတ်ဆိုနေကြပြီး တကယ်အပြစ်ကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်စွာစောင့်ထိမ်းသူတွေအင်မတန်နဲလို့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ခွဲရင် အမွေခွဲဖို့က ဆရာမပြောသလိုတိတိကျကျခွဲဝေဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲရင် ဘယ်သူ့အပြစ်လဲဆိုပြီး အပြစ်ရှိတဲ့သူက နဲနဲပဲရပါတယ်။ ကလေးရှိရင် ကလေးစရိပ် ပေးရပါတယ်။ ဒီလိုရပိုင်ခွင့်တွေသိဖို့ ဥပဒေကိုသိမှပဲတောင်းဆိုနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုခွဲပေမဲ့လည်း အများအားဖြင့် ယောကျာင်္းကသာ အလုပ်လုပ်ပြီး မိန်းမက မှီခိုဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အတွက် အမျိုးသားအတွက်ပြဿာနာမရှိပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲပြီးရင်အမျိုးသမီးက စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်တခုရှိမှပဲအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အများသောအာဖြင့်တော့တလင်တမယားဥပဒေပြဌာန်းရင် နောက်အိမ်ထောင်မပြု ဖြစ်တော့ပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ် ။ နောက်အိမ်ထောင်တိတ်ပုန်းယူရင်တရားစွဲလို့ရတဲ့အတွက်မယားကြီးအတွက် အသာစီးရမယ်လို့ထင်စရာရှိပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းမှု မဟုတ်ရင် side effect အနေနဲ့ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်တွေ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တန်းဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာရင် ပထမအိမ်ထောင်ကိုကြိမ်းသေ ကွာပြီးမှ နောက်အိမ်ထောင်နဲ့တလင်တမယားစံနစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
အခုစံနစ်မှာက မယားကြီးက ကွာချင်ကွာ မကွာချင်နေ အခွင့်အရေးပေးထားပါတယ်။ ကွာရင်လည်း မယားကြီးရဲ့နစ်နာမှုအတွက် အမွေခွဲတဲ့ဥပဒေကို ပြဌာန်းထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးမယားကြီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်မရှိအောင်မွေဖြတ်ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုတာမျိုးကတော့ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဥပဒေလက်တလုံးခြားဘောင်ဝင်အောင် လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ အရေးယူဖို့ခက်မယ်ထင်ပါတယ် ။ တကယ်အရေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ အမွေဖြတ်လို့ လမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေရရင်တော့ ရစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အမွေခွဲဘို့စစ်ဖို့ စသုံးလုံး ရဲ အလွတ်စုံထောက်စသည်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှပဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်ရင်လဲသိတဲ့အတိုင်းပဲအားနည်းချက်က ရှိနေတော့ မယားကြီးအတွက် အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောရုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။
အခုကိစ္စမှာ.. ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့.. ယောက်ျားဖြစ်သူက.. ယူအက်စ်စစ်ဒဇင်ဆိုတာလေး.. ဖြစ်နေတာ…ထည့်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်…။
ဆိုတော့.. ယူအက်စ်မှာက.. တလင်တမယားစနစ်ဖြစ်တာမို့…
တိုတိုနဲ့လိုရင်းပြောရရင်.. ယောကျာ်းက..မယားကြီးရှိလျှက်နဲ့.. မယားကြီးကမကွာပေးရင်.. နောက်မိန်းမယူလို့မရပါကြောင်း…
ကြည့်ရတာ.. ဒီအမှု မြန်မာ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေးဥပဒေကို.. ပြောင်းရလောက်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်..။
သမိုင်းဝင်ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ..။ မီဒီယာက.. ၀င်ကူလိုက်ရင်တော့.. ပွဲပြတ်လောက်တယ်..။
စိတ်ဝင်စားသူ မြန်မာအမျိုးသမီးထု.. ပါသင့်/မပါသင့်..
သဂျီးဇုတ်.. ခီဗျား နောက်တယောက် မယူရဲဒိုင်း.. ယူဖို့ ပိုက်ဆံမရှိဒိုင်း.. ဘာလာအာချောင်သလဲ..။ သွား.. ထမင်းသွားချက်ချေ…
မယားကြီးကကွာမပေးရင်နောက်မိန်းမယူလို့မရဘူးဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒါကြောင့်
တလင်တမယားစံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်မှာ လစ်ဗင်းတူဂဲသားတွေများတာဖြစ်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုနေးချားရေ။ မယားကြီးအတွက် အခြေအနေမကောင်းပါဘူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့၊ ကျမပြောချင်တာကို သိလိုက်တဲ့လူ ရှိလို့။ အဲဒီ စနစ်လေး ပြန့်သွားရင် မိန်းမတွေအတွက် သိပ်မလွယ်တော့ဘူး။ မအူပင်မှာ မီးပျက်နေလို့ အခုမှ ပြန်ဝင်နိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရက်ကြာသွားတာ စိတ်မရှိပါနဲ့။
နောက်တခုက အဲဒီလိုအမွေခွဲဖို့ပြောရင် မယားကြီးကို အကြောင်းအကျိုးစုံစုံလင်လင်မသိသူအများစုက ငွေမက်တယ်လို့ထင်လေ့ရှိကြတတ်ပါတယ်။
မယားပြို​င်​ဥပ​ဒေကိုကျမလည်း မ​ထောက်​ခံဖူးအမ ကြိုက်​လည်းမကြိုက်​ဖူး
perfect မဖြစ်​​တောင်​ အမျိုးသမီး​တွေကို သာတူညီမျှရှိ​စေမဲ့ဥပ​ဒေမျိုး​တွေ ရှိသင့်​တယ်​ ရှိကိုရှိလာရမယ်​
ဒီအမှုမှာလည်း မယားကြီး​နောက်​ဆုံးလုပ်​နိုင်​တာက အမှန်​ကိုလူသိ​စေရုံမို့
ဒီပို့မှာ ဆတ်﻿﻿ဆတ်﻿﻿တို့ ဂီဂီတို့လို့ဂျီပုန်း﻿﻿တွေကလွဲလို့ မိန်းမသား﻿﻿တွေချည်း﻿﻿ဆွေ﻿﻿နွေး﻿﻿နေတာမြင်﻿﻿ရလို့ ဆရာမတို့ဘက်﻿﻿ကအားဖြည့်ပါတယ်﻿﻿။
တစ်﻿﻿လလျှင်﻿﻿တစ်﻿﻿မယားစနစ်﻿﻿…အဲ﻿﻿လေ.. တစ်﻿လင်﻿တစ်﻿မယားစနစ်﻿ကို ﻿﻿ထောက်﻿﻿ခံပါ﻿﻿ကြောင်း။
ဒါ﻿﻿ပေသိ မိန်းမက ﻿ယောက်ျားကိုနိုင်﻿﻿ထက်﻿﻿စီးနင်းလုပ်﻿﻿တာကို﻿﻿တော့ ဘယ်﻿﻿လိုမှလက်﻿﻿မခံနိုင်﻿﻿ပါ﻿﻿ကြောင်း
ဘီလို ဘီလို. . .
မိန်းမတွေကို ထစ်ခနဲရှိ သတ်မယ် နှက်မယ် တကဲကဲနဲ့
ဖြောင်းခနဲ ဒိုင်းခနဲယောကျာ်းမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တုန်းခနသာ နောက်ပြန်ကျေအေးနိုင်တဲ့မိန်းမများ တောအရပ်များတွင်အတော်များ
မအူပင်မှာ မိုးတွေရွာပြီး ထုံးစံအတိုင်း မီးက တစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးပျက်။ ဒါနဲ့ပဲ ကွန်မင့်ပြန်အဖြေ နောက်ကျပြန်ပါရော။
သဂျီး – ဂျော်လကီဆက်ဆက်က သူ့အကြောင်းရေးရင် တရားစွဲမတဲ့။ ကိုမာဃကတော့ မယားကြီးနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးပြီ လို့သတင်းစာထဲထည့်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျော်လကီဆက်ဆက်ကတော့ မင်္ဂလာပွဲ ဝေးနေဦးမှာပါတဲ့။ နောက်ကြောင်းရှင်းပြီဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ချက်ချင်းမယူကြသတုန်း။
မမယ်ပု – ပျောက်နေတာကြာပြီနော်။ ပြန်ဝင်လာတာ ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုပါတယ်။
ကိုလံဘတ်စ်ရေ – တစ်လင်တစ်မယားစနစ် အကြောင်းပြောတော့ ရွာထဲက ဘယ်ရွာသားမှ သိပ်ထွက်မလာတော့ဘူး။ ကျမ ယောက်ျားကတော့ ဒီစနစ်ကြီးက မကောင်းပါဘူးတဲ့။ မ်ိန်းမ လေးယောက်ယူခွင့်ရှိတဲ့စနစ်ပဲ ကောင်းသတဲ့။ တစ်လတစ်မယားစနစ်အကြောင်းသာ ရေးလို့ကတော့ ရွာသားတွေ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်လာပြီး ထောက်ခံကြမှာ။
နန်းတော်ရာသူ – ညီမရေ နောက်ဆုံးတော့ ဟိုစကားလိုပေါ့။ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ် ဆိုတာလေ။ ပြီးတော့ တန်ရာတန်ရာ ဆိုတဲ့စကားလည်း ရှိသေးတယ်။ မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယောက်ျားက မိန်းမကို တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ နိုင်တယ်။ အမလို ယောက်ျားကိုနိုင်တယ်လို့ မြို့ပေါ်မှာ သတင်းကြီးတဲ့ မိန်းမတောင် အ၀တ်လျှော်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားပုဆိုးနဲ့ မိန်းမထဘီ ရောထည့်ပြီးမလျှော်တတ်ဘူး။ တော်ကြာ ကိုယ့်ယောက်ျား ဘုန်းတွေဘာတွေ နိမ့်သွားပြီး လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း မကောင်းဖြစ်ရင် ဘီလိုလုပ်မတုန်း ဟီး။ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရားပေါ် မိန်းမတက်သင့် မတက်သင့် ဆိုတာတွေ အသာထား။ ကိုယ့်အိမ်ထဲ ကိုယ်နေတဲ့ မိန်းမတွေ အ၀တ်လျှော်တာတောင် တစ်ပေါင်းထဲ ထည့်ပြီး လျှော်ကြလို့လား။ တရုတ်ပြည်မှာတောင် ယောက်ျားအ၀တ်အစားနဲ့ မိန်းမအ၀တ်အစား ရောလျှော်ကြသေးတယ်တဲ့။ ဒီမှာက ဘာဖြစ်နေမှန်းကို မသိပါဘူး။
ဝင်ပြောပါရစေနော် ၊ သဘောထား မတူရင် စကားကြမ်းရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ။
မပြုံး က လစ်ဘရယ် အမြင်ရှိတာ သိပါတယ် ၊ ကျနော်လဲ လစ်ဘရယ် ပါဘဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ မပြုံး ရဲ့ ယောက်ကျားဆီက ပိုက်ဆံကို ( ယောက္ခမ အမွေ အထိ ) ၊
မိန်းမက လုံလောက်အောင် ယူချင်နေတဲ့ Logic ကိုတော့ သဘောမကျဘူး ။
လင် နှင့် မယား ယူကြတာဟာ ချစ်လို့ ဘဝ ကို နှစ်ကိုယ်တူ ရုန်းကန်ကြတာပါ ။
၁ ။ လက်ထက်ပွား ကို တစ်ဝက်စီ ပိုင်တဲ့ ကိစ္စ ကို လက်ခံပါတယ် ။
၂ ။ ယောက်ျားရဲ့ မိဘ ဆီက မရသေးတဲ့ အမွေ အထိ လှမ်းမျှော်တာကတော့ ၊
ဒါ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာကို ၊ မတရား မျှော်လင့်မှုလို့ ယူဆရမယ် ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ မိန်းမတွေ ၊ ကိုယ့် ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ပြီး ၊
ကိုယ့် နှာခေါင်းပေါက်နှင့် ကိုယ် အသက်ရှုသင့်တယ် ။
သူတပါး ကို သွား မှီခိုမိမှတော့ အနှိမ်ခံရ ၊ အဖိနှိပ် ခံရမှာဘဲ ။
လင်မယား ၂ ယောက်စလုံး အလုပ် ကိုယ်စီ ရှိသင့် ၊ လုပ်သင့်တယ် ။
ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် လုပ် ၊ ကိုယ့် ပိုက်ဆံ ကိုယ်သုံး ပေါ့ ။
ကိုယ်ဝန် ရှိလာလို့ အလုပ် ခဏ နားရရင်တောင် ၊
ကလေး နဲနဲ ကြီးလာတာနှင့် ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် ပြန်လုပ်သင့်တယ် ။
အဲဒီ အခါ ကျရင် ၊ လင်မယား ကွဲလဲ ခပ်မာမာဘဲပေါ့ ။
လက်ထက်ပွား ကို တစ်ဝက်စီ ခွဲယူကြ ။
ကလေး ထိန်းသိမ်းခွင့် နှင့် ကလေး စရိတ် ကို ညှိကြ ။
ယောက်ျားရဲ့ မိဘ ဆီက မရသေးတဲ့ အမွေ ကို ထည့်ကိုစဉ်းစားစရာ မရှိပါဘူး ။
အဲ ၊ တစ်လင် တစ်မယား ဥပဒေ ကိုတော့ ၊ မူ အရသဘောတူပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အဲဒီအတွက် ထပ်ထုတ်ပေးရမယ့် ဥပဒေတွေ အများကြီး လိုသေးတယ် ။
နို့မို့ရင် ၊ မယားကြီး / လင်ကြီး က ညစ်ပြီး ကွဲမပေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။
ဒီဖက် နိုင်ငံတွေမှာ က လုံလောက်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိနေပြီးသား လေ ။
အင်းးးးး ၊ ဗဟုသုတ အနေနှင့် ပြောပြရရင် ၊
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ တစ်ဖက်ဖက်က ကွဲလိုရင် ၊ တရားရုံးကို သွားလျှောက်ရတယ် ။
ပြီးရင် ၊ ၂ နှစ် တိတိ Separated အိမ်ခွဲနေရမယ် ။
အဲလို ၂ နှစ် တိတိ Separated အိမ်ခွဲနေနေတုန်းမှာ ၊
ကိုယ်က တခြား အဖေါ်နှင့် ( မယားငယ် / လင်ငယ် နှင့် ) အတူ နေခွင့် ရှိသွားပြီ ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ တခြား အဖေါ် ကို တရားဝင် လက်ထပ်ခွင့် တော့ မရှိသေးဘူး ။
တခြား တစ်ဖက်က မကွဲချင်လို့ တစ်ခါက နှစ်ခါ အတင်းလိုက်ကပ်နေရင်လည်း ၊
တရားရုံး ကို တားမြစ် အမိန့် ထုတ်ပေးဘို့ လျှောက်လို့ရတယ် ။
( ကိုက် တစ်ရာ အတွင်း မဝင်ရောက်ရန် တားမြစ် အမိန့် ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် )
( တားမြစ် အမိန့် ထုတ်ပေးထားလျက်နှင့် ကိုက် တစ်ရာ အတွင်း ဝင်ရင် ထောင်ကျမယ် )
အဲလို ၂ နှစ် တိတိ ၊ Separated အိမ်ခွဲနေပြီးသွားရင် ၊
တရားရုံးက ကွဲချင်စိတ် ရှိသေးလားလို့ ခေါ်မေးလိမ့်မယ် ။
အဲဒီမှာမှ ကွဲချင်စိတ် ရှိသေးတယ်ဆိုရင် ၊ တရားရုံးက ကွာစာ ချပေးလိုက်မှာဘဲ ။
တခြား တစ်ဖက်က သေအောင် ပေါင်းချင်နေလဲ ၊ မကွာချင်လို့လဲ မရတော့ပါဘူး ။
အဓိက ကတော့ ၊ လူ တစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် ကို ဦးစားပေးတဲ့ စံနစ်ပါ ။
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ Sex ကို ကိုယ် ကြိုက်တဲ့သူ ကို ကိုယ်ပေးမှာဘဲ ။
မယား ခိုး မှု ၊ လင် ခိုး မှု ၊ Adultery မှု ဆိုတာ ၊ ဥပဒေ မှာကို မရှိဘူး ။
ဟဲ ဟဲ ၊ အဲဒါမှ လစ်ဘရယ် အမြင်စစ်တာ ။
Legal separation အဲဒါက.. အသိမမှားရင်.. ဒီဗို့စ်သွားနေတာရဲ့ ပရောဆက်ထဲက လမ်းခုလတ်အမိန့်တခုပဲ..။
တရားဝင်မကွဲသေးပေမယ့်.. လင်နဲ့မယား.. အဲဒီလမ်းပေါ်ရောက်နေကြပြီလို့.. ထင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
….အဲလို ၂ နှစ် တိတိ ၊ Separated အိမ်ခွဲနေပြီးသွားရင် ၊
တခြား တစ်ဖက်က သေအောင် ပေါင်းချင်နေလဲ ၊ မကွာချင်လို့လဲ မရတော့ပါဘူး ။….
ကွာခွင့်သွားလျှောက်ရင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးရသေးလား။ နောက်မိန်းမယူချင်တဲ့သူကည်းနည်းလမ်းရှာမှာပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့မထိမ်းနိုင်ရင် ယိုပေါက်တွေ side effect တွေကတော့ရှိလာနိုင်တာပဲ။
” ကွာခွင့်သွားလျှောက်ရင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးရသေးလား ”
အကြောင်းပြချက်ကတော့ သဘောလောက်တော့ ပေးရမှာပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ” ကျနော် မချစ်တော့လို့ပါ ” ဆိုရင်လည်း ရတယ်တဲ့ ။
ဘဖော says: ( ယောက်ျားရဲ့ မိဘ ဆီက မရသေးတဲ့ အမွေ အထိ လှမ်းမျှော်တာကတော့ ၊
ဒါ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာကို ၊ မတရား မျှော်လင့်မှုလို့ ယူဆရမယ် ။)
ဒီလိုရှိပါတယ် ဘဖော။ မြန်မာပြည်မှာက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချစ်လို့ယူရတာထက် များသောအားဖြင့် ပေးစားတာကိုပဲ ယူကြရတာ။ LT လည်း နေရဲကြတာ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ဖက်မိဘရဲ့ သဘောထားက တော်တော်အရေးပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘာမှန်းညာမှန်း မသိဘဲယူကြရတာဆိုတော့ များသောအားဖြင့်ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုရတာ ထီထိုးရသလိုပဲ။ နှစ်ဖက်မိဘရဲ့ သဘောထားနဲ့ ယူကြရတဲ့သူတွေမှာတော့ မိဘပိုင်းက တာဝန်ရှိပါတယ်။ မိဘအမွေကို မျှော်လင့်ခွင့်ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က မိဘသဘောထားနဲ့ ယူကြရတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ စီးပွားရေးကလည်း ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား သဘောမျိုး ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ယူပြီးမှ ကိုယ့်ကို နည်းနည်းပါးပါး ပေးပြီး ကန်ထုတ်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုလပ်ဘ၀နဲ့ လူတောတိုးဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။
နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်ရှာနိုင်စုနိုင်တဲ့ လက်ထက်ပွားထက် မိမွေဘမွေလို ထိမ်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကသာ အားပိုသာပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရှာရှာ မိဘအမွေ အိမ်ခြံမြေ ဈေးတက်သွားတာမျိုးကို လိုက်လို့ကို မမီဘူး။ ကိုယ်ကနည်းနည်းလေးရပြီး မယားငယ်က အများကြီး ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။
ပြီးတော့တစ်ခါ မယားကြီးဆိုတာ ယောက္ခမဒဏ်ကိုလည်း ခံထားရတယ်။ ငယ်လင်ငယ်မယားဆိုတာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့လူချည်းပဲ။ မယားငယ်ကကျတော့ သူများထောင်ပြီးသား လှေကားကို တက်ချင်တာ။ ဒါကြောင့် ငွေမရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဆီမှာ မယားငယ်မရှိကြတာပေါ့။
အထက်က အကြောင်းတွေကြောင့် ကျမ ကြုံ တွေ့ရတဲ့ ပုံစံတွေက မယားကြီးတွေဟာ ကိုယ့်ယောက်ျားကို ကွာမပေးနိုင်ကြဘူး။ ယောက်ျားက မယားငယ်ကို တခြားမှာ အိမ်တစ်ဆောင် မီးတစ်ပြောင်နဲ့ ထားတာ သိသိနဲ့ ဒီလိုပဲ အိမ်ထောင်ရေးငရဲကို ခံစားပြီးနေကြတယ်။ မယားကြီးကို စိတ်ကျေနပ်အောင် ပေးမှ သူကွာပေးမှာပေါ့။
တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေမရှိတော့ မယားပြိုင်စနစ်ကို ပိုပြီး အားပေးရာကျတယ်။ မိန်းမ ၂ယောက်ယူတဲ့လူ သေရင် သားသမီးတွေ အမွေလုကြလို့ မပြီးတော့ဘူး။ တချို့ ၁၀ နှစ်လောက်တရားပြိုင်ကြရတယ်။ မြန်မာတွေ အမွေလု တော်လို့လား မသိဘူး။ ရန်ကုန် မန္တလေးလို မြို့ကြီးတွေမှာ မြေကွက်ကျယ်ကျယ် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေဆို မြန်မာပိုင်သိပ်မရှိတော့ဘူး။ မြန်မာတွေက အမွေခွဲဖို့ တရုတ်လက်ထဲ ထိုးအပ်ရ ရောင်းကြရတယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာတွေ ဘေးရောက်ရောက်သွားကြတာ။
(လင်မယား ၂ ယောက်စလုံး အလုပ် ကိုယ်စီ ရှိသင့် ၊ လုပ်သင့်တယ် ။
ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် လုပ် ၊ ကိုယ့် ပိုက်ဆံ ကိုယ်သုံး ပေါ့ ။)
ဒါကလည်း ဟုတ်တာပါပဲ။ အခု မိန်းမတွေ အလုပ်ကိုယ်စီဖြစ်လာကြပါပြီ။ အလုပ်မလုပ်တဲ့ မိန်းမတွေလည်း အိမ်အလုပ်နဲ့ကို မနိုင်ဘူး။ ယောကျာ်းထက်တောင် ပိုလုပ်ရသေးတယ်။ ဟိုနိုင်ငံတွေလို အသားဘူးဖောက်ပြီး စားလို့ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်း ဆိုတာ မြန်မာပြည်အတွက် မှန်နေတုန်းပါပဲ။ အိမ်ထောင်တစ်ခု ကြီးပွားခြင်း မကြီးပွားခြင်းမှာ မိန်းမရဲ့ အစွမ်းအစ ပါဝင်မှု မသေးဘူး။